လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။ ရှာတွေ့ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Villamandos | | အချိန်အား, စုံတွဲနှင့်လိင်
သင် unmask လုပ်ချင်ပါသလား လိမ်နေသောအမျိုးသမီးများ? ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်များသောအားဖြင့်ရှက်စရာကောင်းသည့်အခြေအနေမျိုးမှထွက်ခွာရန်၊ သူငယ်ချင်းအချို့ရှေ့တွင်ပြသရန်ကြိုးစားရန်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိမ်ပြောခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်၊ ရှင်းပြရန်ခက်ခဲသော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုလိုချင်သည်ထက်
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုလည်းသိကြ၏ မိန်းမတွေကယောက်ျားထက်ပိုကောင်းတယ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့သည် ပို၍ စတိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသူတို့သည်မကြာခဏလိမ်ပြောခြင်းနှင့်သူတို့၏မုသားများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်သဘာဝအားဖြင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိမ်ပြောနေသည်ကို ပို၍ သတိပြုမိကြသည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကငါတို့ထက်အများကြီးပိုကောင်းတာကြောင့်ဒီနေ့ဆောင်းပါးကိုပြင်ဆင်ချင်တယ်၊ လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။။ အကယ်၍ သင်လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့ရှိလိုလျှင်ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယနေ့သင်သည်ကံကောင်းခြင်း ဖြစ်၍ သင်၏အကြံဥာဏ်ကြောင့်သင်၏အသက်တာ၌ရှိနေသောထိုမိန်းမကိုအစဉ်မပြတ်လိမ်ညာနေသည်ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
3 ခေတ္တခဏခေတ္တရပ်သည် (သို့) ခေတ္တခဏတုံ့ပြန်သည်
5 သင်၏နှုတ်ခမ်းများကိုအတူတကွဖိ။ သို့မဟုတ်သင်၏လျှာကိုသူတို့အပေါ်အုပ်စိုး
6 လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူမမကြာခဏပြုလေ့ရှိသော်လည်း၊ အကယ်၍သာ သူမအသက်အရွယ်မှနှစ်အနည်းငယ်နုတ်ခြင်းဖြင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှ ဦး နှောက်အာရုံကြောမသွားနိုင်ပါ အကယ်၍သာ သူသည်ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေပါကစိတ်လှုပ်ရှားသွားလိမ့်မည်, ကြီးမားတဲ့ဆိုပါစို့ ဒီလိမ်လည်မှုများကိုသိရှိနိုင်ဖို့သူ့လက်ဟန်အမူအရာ၊ သူလက်နဲ့ဘာလုပ်နေတယ်၊ ​​စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာမကြည့်ဘဲကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့အပြုအမူတွေကိုအထူးဂရုပြုရမယ်။
ဤအပိုင်းကိုမပြီးမီကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်သတိထားရန်သင့်အားမသတိပေးနိူင်ပါ။ အကြောင်းမှာသဘာဝအားဖြင့်အလွန်စိတ်သောကရောက်နေသောအမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းရှိနေစဉ်ထိုအခြေအနေတွင်ရောက်နေသောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ သူမအခြေအနေကိုမသက်မသာနှင့်သင်နှင့်အတူတစ်ယောက်တည်းနေလိုခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်တွင်သူသည်သင့်အားလိမ်ညာသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူမကိုတစ်စုံတစ်ရာကိုစွပ်စွဲပါကသင်ဘာလုပ်မည်ကိုအထူးသဖြင့်သေချာစွာပြောပါ။ အထူးသဖြင့်သူမသည်သင့်အားလိမ်သည်ဟုသက်သေပြပါ။
စကားပြောဆိုမှုကိုအလွန်ဂရုပြုခြင်းသည်လိမ်လည်သူနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့မုသားကိုကောင်းကောင်းလေ့လာထားပေမယ့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းတစ်ခုတည်းကိုပြောပြနိုင်သည်။ သင်လိမ်ပြောနေသည်ကိုသင်မည်မျှကျင့်သုံးခဲ့ပါစေအမှားတစ်ခုကိုအလွယ်တကူပြောပြနိုင်သည့်မုသားဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤတွင်တစ်ကြိမ်၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသင်စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းကိုအထူးသတိပြုပါ။ သူမကြောက်ရွံ့သောကြောင့်မုသားပြောခြင်း၊ ဇာတ်လမ်းပြောသည့်အခါရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်အသေးစိတ်မေ့သွားသောအခြားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကခင်ဗျားတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာလိမ်လည်သူအများဆုံးလို့ထင်တယ်။
ခေတ္တခဏခေတ္တရပ်သည် (သို့) ခေတ္တခဏတုံ့ပြန်သည်
အခါအားလျော်စွာလိမ်ပြောသူမည်သူမဆိုသည်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုလက်ခံကျင့်သုံးရန်ရောက်လာပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကဲ့သို့မျက်တောင်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုပြောသည့်အထိယုံကြည်ခဲ့သည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မိန်းမတွေဟာသဘာဝအလျောက်လိမ်ညာလေ့မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်လိမ်တဲ့အခါသူတို့တီထွင်နေတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်။ တခါတရံမှာသူတို့ကလိမ်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်တဲ့အခါသူတို့ကခဏခဏရပ်နားတယ်.
သူမကကျွန်ုပ်တို့ကိုအသေးစိတ်ကျသောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ များစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမပေးဘဲအဖြေပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ ကောင်းသောလိမ်လည်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မုသားကိုတီထွင်ရန်မလိုပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ရှည်လျားသောခေတ္တနားခြင်းကိုရှောင်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအမျိုးသားတစ် ဦး သို့အများဆုံးဆွဲဆောင်ခြင်းကဘာလဲ။
၎င်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး (သို့မဟုတ်ယောက်ျားတစ် ဦး) သည်လိမ်ညာနေသည်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားနိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ပုံပြင်တပုဒ်ရေးသည့်အခါရှာဖွေကြသည် (သို့) သတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေတခုခုပေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်စကားပြောခွင့်ကိုနှိမ့်ချသည်။ ငါတို့ပြောသကဲ့သို့ဒီဟာကသင်္ချာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုတွေ့ရင်မင်းမိန်းမကညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစကားပြောလာတယ်၊
အမျိုးသမီးအတော်များများကလိဂ်များမှသူတို့လိမ်နေကြောင်းပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားသူများကမူလိမ်သည့်နေရာ၌ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုလိမ်ရန်ကြိုးစားရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူတို့အတွက်မည်သည့်အမျိုးသမီးကမျှသူမနှုတ်ခမ်းကိုဖိခြင်းသို့မဟုတ်သူမလိမ်သည့်အချိန်တွင်သူမနှုတ်ခမ်းကိုအတင်းအကျပ်မလျက်မရှောင်ရှားနိုင်ပါ။
မိန်းမတစ်ယောက်ကသင့်ကိုလိမ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိချင်ရင်သူမရဲ့အမူအယာတွေကိုအရမ်းဂရုစိုက်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျေးဇူးတင်တာကြောင့်မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာတကယ့်အဖြစ်မှန်လား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုနေ့တိုင်းလိမ်ပြောနေတဲ့အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့တီထွင်မှုလားဆိုတာမင်းသိနိုင်တယ်။
လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်
လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်မှာမလွယ်ကူပါအကြောင်းအရင်းကတော့ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာအကြိမ်အနည်းငယ်လိမ်လေ့ရှိပြီးသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်အဲဒါကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားကြပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်လက်ဟန်ခြေဟန်အမူအရာ၊ အစီအစဉ်ချထားမှုညံ့ဖျင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရှည်လျားလွန်းသောခေတ္တနားခြင်းသည်လိမ်ညာမှုကိုရှာဖွေရန်သော့ချက်အချို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအရာအားလုံးကိုပုံမှန်စကားဝိုင်းတခုခုမှာတွေ့ရှိနိုင်ဖို့သင်အများကြီးဂရုစိုက်ရမယ်၊ သူတို့ပြောနေတာကိုမဆုံးရှုံးဘဲ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှု၊ အမူအယာနဲ့အာရုံခံစားမှုတွေကိုအရမ်းဂရုစိုက်ပါ။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်မံသတိရပါ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှသက်သေမပါဘဲလိမ်သည်ဟုမစွပ်စွဲရ ပြီးတော့မင်းနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ခဏကြာတဲ့အထိရိုက်ကူးတာတွေကြောင့်ပဲ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုလိမ်ပြောသူတစ် ဦး အားစွပ်စွဲခြင်းသည်အလွန်လေးနက်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်လုံးဝသေချာသည်နှင့်သာစွပ်စွဲချက်ကိုပြုလုပ်ပါ။
သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုမျက်စိကန်းသောယုံကြည်မှုရှိလျှင်တောင်မှသင့်အားဆန့်ကျင်ရန်ကစားခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေသောသူတို့၏သူငယ်ချင်းများသည်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုများကိုရှာဖွေသောနေရာဖြစ်သည် လိမ်နေသောအမျိုးသမီးများဤကဲ့သို့သောအမျိုးသားများရှိသော်လည်းလူတိုင်းသည်သင့်အားမယုံသင်္ကာဖြစ်သွားစေရန်အဖြစ်မှန်ကိုပြုပြင်ခြင်း (သို့) "သူတို့၏အမှန်တရား" ကိုပြောခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။
105 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးများသည်ထိုတွင်ဖော်ပြထားသည် ... စစ်ကြောရေးအပြီးတွင် ... ပုပ်နေသည့်အချိန် ... သူတို့သည်ထိုရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်များကိုပြုလုပ်ကြပြီးအသက်ရှူ။ FUCK ကိုမပို့နိုင်ပါ။ ပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားပါ။
Hahaha သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမပေးမီရိုးရိုးသားသား၊ မူလတန်းကျောင်းသို့သွားရန်စာရေးရန်သင်ယူသည်။ သင့်အားနိမ့်ပါးသောအရေးအသားနှင့်ဖော်ပြမှုအဆင့်ဖြင့်မည်သူမျှထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်အချိန်မရှိခြင်း၊ အတိုတောင်းသောအဖြေများကြောင့်သင်နှင့်ရိုင်းစိုင်းစွာပြောသောကြောင့်၎င်းသည်အမျိုးသမီးများသည်အကြောင်းအရာကိုရှောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်ထိုအချိန်က isteric ဖြစ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမလိမ်နေလို့ပါ၊ တစ်ခါတလေသူမဟာကျောက်တုံးနဲ့ခဲယဉ်းတဲ့နေရာကြားမှာထားလိမ့်မယ် ... မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစမ်းသပ်ဖို့ ... မင်းသူမထက်ပိုပြီးလိမ္မာပါးနပ်ဖို့လိုတယ်။ လနှင့်шантажကစားပါ
Lola Bella ဟုသူကပြောသည်
lola bella အားပြန်ကြားပါ
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာမာရ်နတ်အိပ်ပျော်သွားတယ်၊ လိမ်လည်သူကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့သူမပြောတဲ့လိမ်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ဟန်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သူကအပြင်းအထန်တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ အတန်းတစ်ခုကသူအမှားလုပ်မိမှာသေချာတယ်
REBERT LEY ဟုသူကပြောသည်
လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းမမြဲပါ။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်အမှန်တရားကိုကောင်းကောင်းပြောပြခြင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးနောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပြီးတွင်ကောင်းမွန်သောအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်လာသောအခါအမှားအယွင်းများသည်အမှန်တရားကိုကောင်းကောင်းပြောပြနိုင်ခြင်း၊ ငိုတာကသင်ဘယ်တော့မှမင်နီကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပြောတတ်ပါဘူး
REBERT LEY ထံပြန်သွားပါ
ပထမ ဦး ဆုံးငါပြောရမယ်ဆိုရင်မိန်းမတွေဟာဘ ၀ မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်
အရာအားလုံးသည်ရေရှည်အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ရေရှည်တွင်အနိုင်ရလိုလျှင်သို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်လိုပါကမုသားသည်ကောင်းကင်၌တံတွေးထွေးခြင်းနှင့်တူသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ပိုကောင်းတဲ့အလောင်းအစား
Eduard Baron ဟုသူကပြောသည်
ငါအလုပ်ကိုစွန့်ခွာသောအခါငါဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်မှီဝဲခြင်း, သူမဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမကိုပြောပြသည်သူမမှာဆဲလ်မရှိဘူးဆိုတာလုံးဝကိုမပြောဘဲငါ့ရဲ့ရည်းစား, ငါ့ကိုဖြေဖို့အလွန်နှေးကွေးနေ တကယ်တော့သူမဖုန်းခေါ်တဲ့အခါသူချက်ချင်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမှတစ်ဆင့်သူကသူဘယ်လောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့ပြောတယ်။ သူကသံသယဖြစ်ဖွယ်ရယ်မောသံကိုလွှင့်လိုက်တယ်။ အချို့အတွက်မူကြာမြင့်စွာမယူခဲ့သော်လည်းအခြားသူများတွင်မူသူသည်ပိုမိုနှောင့်နှေးရန်အကြောင်းပြချက်များပေးခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဆိုးမသွားခင် ... စကားမစပ်ဝေးကွာသောဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုကူညီပါ😣
မင်းပြောနိုင်တာကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကရေးခဲ့တာပဲ၊ မိန်းမတွေကအနည်းဆုံးတော့ငါမခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ ဤ "နိမိတ်လက္ခဏာများ" သည်အမြဲတမ်းတကယ့်လက်တွေ့မဟုတ်ပါ၊ 😀
လူတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုရေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားအဲဒါကိုမထီမဲ့မြင်ပြုရမှာလား။ Catalina ကိုကြည့်ပါ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုသည်မက၊ အမျိုးသားများသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရနိုင်ပါ။ မုသာစကားကိုပြောခြင်း၊ မုသာစကားကိုပြောခြင်း၊ မုသာစကားကိုယုံတတ်သောမိန်းမများရှိတတ်၏။ မည်သည့်လိင်ပင်ဖြစ်ပါစေမုသားကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအမွှေးနံ့သာအဖြစ်အသုံးပြုသောသူများသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏အဆိပ်ကြောင့်အသက်ရှူကျပ်ကြသည်။ မင်းရဲ့လိမ်ညာမှုတွေအားလုံး Catalina ကိုယုံကြည်လိမ့်မယ်။ ကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်၊ ယောက်ျား၏ဘ ၀ တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်ခန်းစာမရှိပါ၊ လိမ်နေသောအမျိုးသမီး၏ပိုက်ကွန်များတွင်တစ်ချိန်ချိန်ဖမ်းမိခြင်းထက်ပိုကောင်းသောသင်ခန်းစာမရှိပါ။ လှပသောအနမ်းများ!
ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားတမ်း caught တြေ they တငြ်ရြေးခ,ယ်ခဲ့ပ, သည်။ cellulite, သူမ၏ stinky မြို့ငါ့ကိုငြီးငွေ့, ငါပဲသူ့ကိုကိုက်တာပေါ့ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးရှိပြီးသား, ဒါကြောင့်သူမမိုက်မဲသောအရာသို့ကျဆင်းသွားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူမ၏ဆဲလ်ညစ်ညမ်းမှုကနေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုဖျက်ပစ်ရန်မမိုက်မဲသောကြောင့်, ငါသူမကိုပို့ ဂရုမစိုက်ဘဲယခုလာနေသောဆင်းရဲသောကောင်လေးသည်မုန့်စိမ်းဟက်ဟက်ကဲ့သို့ပိန်သွားပြီးထိပ်နှင့်ဆိတ်ကွယ်ရာနေရာတွင်ရှိလိမ့်မည်ဟူသောကဒ်ငယ်ကိုမသိပါ။
ဂျိုအဲလ်ကိုသင်ရထိုက်သောလေးစားမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်အားဖြင့်သင့်ကိုစိတ်မပျက်စေနိုင်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်သူမသည်သူမနှင့်သူမသေဆုံးလျှင်ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါကကျွန်မသူမအားလေးစားသင့်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ခွဲခွာခြင်းသည်ခွဲခြားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုရှိရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးသူတို့ကိုမည်သည့်အခါကမျှဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းမပြုရသေးသောကျွန်ုပ်တို့၌စိတ်ဖောက်ပြန်မှုရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အတွက်ထားခဲ့လျှင်သင်၏နောက်ဆက်ဆံရေးနှင့်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်ကြိုးစားပါ သူတို့ကသင့်ကိုဘယ်တော့မှလှည့်စားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်။
မင်းဟာအမျိုးသမီးများစွာနဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာသူမခွေးကိုထွက်သွားစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပြproblemနာမရှိဘူး။ မင်းရဲ့ဖိစီးမှုဟာသင်ခက်ခဲတယ်၊ ငါသိပြီးသားငါမင်းကိုအမြဲတမ်းစမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာကိုနားလည်တယ် သူတို့ရဲ့ shit skip ဖို့ဘယ်လို
Santiago နဲ့ကျွန်တော်လုံးဝသဘောတူတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကငါ့ဇနီးကိုသက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ သူမမှာအရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ သူမငါ့ကိုအပြစ်တင်ပြီးအလွန်အားကောင်းတဲ့လေသံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါဟာနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားတွေထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငြင်းပယ်သို့မဟုတ်မိုက်မဲတောင်းပန်ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်မှာအလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသားများသည်အကာအကွယ်အတွက်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသောပင်ကိုအသိစိတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများကိုတစ်ယောက်တည်းထားခြင်းထက်မုသာစကားကိုယုံကြည်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူမကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရုံသာမကသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုလည်းပါဖျက်ဆီးပစ်သည်သာမကမေးခွန်းတစ်ခုမှာ ... အကယ်၍ သင်သူတို့ကိုသင်ဆက်လက်ဖျက်ဆီးလိုပါက ... မိမိကိုယ်ကိုလုပ်ရန်ပိုမိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်စားမှုများအတွက်အမှန်တရားမှာမပြောင်းလဲပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ဤမေးခွန်းကိုပြန်လှန်သုံးသပ်လိုသည့်နည်းလမ်းဖြင့်အဖြေကိုရှောင်ရှားရန်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်မှထွက်လေ့ရှိကြသည်။ သို့မှသာသူတို့ကကျွန်ုပ်အားအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရချိန်တွင်သင့်အားအပြစ်ရှိစေလိုသည်။ အဆိုးရွားဆုံးသောဖြစ်ရပ်တွင်အကူအညီဖြစ်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် Infragants တွင်ရယူရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ထင်လိမ့်မည်မထင်သေးပါ။
သူပြောတာ၊ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီဘယ်လိုပြောတာ၊ သူပြောတာ၊ သူပြောတာကိုသတိထားပါ။
မှတ်ဥာဏ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကတော့အစားအစာများစွာပါ ၀ င်သောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖော့စဖရပ်စ်လို့ခေါ်တယ်၊ အဲဒါကိုငါး၊ စီရီရယ်၊ ကိုကိုးစတာတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။ မင်းကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးမုသာကောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းကကောင်းကောင်းစားဖို့၊ များစွာသောတွေအများကြီးလေ့ကျင့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ မင်းဘ ၀ ရဲ့လိမ်လည်မှုမှတ်တမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးတဲ့အခါငါ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောပြပါ ဦး ။ အရမ်းလိမ်ရတာအမှန်ပဲ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါ။ ဟတ်
မင်းတို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်စွန့်ခွာခဲ့ကြတာ၊ သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ အရာရာအားလုံးဟာကုန်သွားတဲ့နေ့ရှိတယ်
သူတို့ကတိုတိုအတွက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးမဟာဗျူဟာများဖြစ်ကြသည်။ တိုက်ခိုက်မှုဟာအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်တယ်၊ အကယ်၍ သူတို့ကမင်းကိုလိမ်ရင်မင်းကိုငါသာကျိန်ဆိုပြီးကျိန်ဆိုမိရင်တောင်မှမင်းကိုစွန့်ခွာရမှာပဲ။ ယုံကြည်မှုနဲ့သစ္စာရှိမှုရဲ့ပုံသဏ္alreadyာန်ပျက်သွားပြီးပြီ။ ပြန်ပြုပြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကသင့်ကိုမလေးစားဘူးဆိုရင် Pegging ကမိုက်မဲ၊ တကယ်မိုက်မဲတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဘယ်တော့မှမ Mabel, တစ် ဦး ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးမဟာဗျူဟာလုပ်ဘယ်တော့မှမ။ သူတို့ကိုသင်အသက်ကယ်သမားအဖြစ်အသုံးပြုပါကမင်းသည်သင်၏အဆိုးမြင်အတွေးအခေါ်တွင်နစ်မြုပ်သွားလိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှုပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါခွင့်လွှတ်မှုဟာခက်ခဲပြီးသင့်ကိုငါသဘောတူတယ်။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုလွှတ်၏၊ ထိုသူသည်ချစ်၏၊ အကြိမ်ကြိမ်အဘယ်သူသည်ခွင့်လွှတ်သည်ကိုပြသသည်၊ မုသားကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းအရတန်ဖိုးထားသူတိုင်း။ ငါခွင့်လွှတ်တယ်၊
သင်အလွန်မှန်ကန်သောကြောင့်သင် egss ကိုရယူပြီးထားခဲ့ပါ။ ဖောက်ပြန်မှုကိုခွင့်မလွှတ်ပါ။ အခြားသူနှင့်သင်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ပါ။
ငါအသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘဝ၌ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုရင်ဆိုင်ရန်မလိုလားသည့်အခါအမျိုးသမီးတွေလိမ်ညာထင်မြင်ချက်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းသည်စသည်တို့နှင့်စသည်စသည်ဖြင့်။
သူတို့ကသူတို့အလွယ်တကူခွဲခြားသတ်မှတ်ကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ကြသည်။ ငါလိမ်နှင့်များစွာသောအများကြီးငါ့မင်္ဂလာဆောင်၌ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအယူအဆများကိုစွန့်လွှတ်ပြီးရက်သတ္တပတ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်သည့်အခါ မှလွဲ၍ ကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်ပါ။
ထိုမိန်းမသည် sexy ခံစားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်သွေးဆောင်သည်။
ကျွန်တော့်အမှု၌ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သက် (၇) နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏မန်နေဂျာကိုအမည်ပေးပြီးကတည်းကကျွန်တော့်ဇနီးသည်အလွန်ထူးဆန်းစွာပြုမူခဲ့သည်။
မိန်းမကမနာလိုမှုကိုဖန်တီးပေးတယ်။ ပြီးတော့မနာလိုမှုကမရည်ရွယ်ဘူး၊ သူမအကျိုးအတွက်အသုံးချတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ "ငါမင်းရဲ့မနာလိုမှုကိုငါမခံနိုင်ဘူး" ။ သူတို့ဒေါသထွက်လာရင်အိပ်ရာမဝင်ချင်ဘူး၊ စသည်တို့ ...
တစ်နေ့ကျတော့သူမရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းနံရံမှာ mp3 တစ်ချပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်မိန်းမတစ်ယောက်ဟာသူနဲ့ငါ့ဘက်မှာရှိနေစဉ်နဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတာကိုကြားမိတယ်။ သူမ ၀ န်ထမ်းတွေကိုဒေါသတကြီးရိုက်နှက်တာ၊ ငါသူမအကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးသည့်ပုံစံများ»သူမသည်အရောင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ပတ်သတ်၍ အပတ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသတိရမိသည်။ ငါသူမကိုထိပ်တိုက်တွေ့သောအခါသူက“ မင်းငါ့ကိုလှည့်စားနေတယ်” ဟုပြောသည်။ ထို့နောက်သူမကသူမကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်ရန်သူတတ်နိုင်သမျှလုပ်ခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိရန်ကျွန်ုပ်အားယုံကြည်ပါ။ »
၂ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ငါဖျက်ဆီးလိုက်လို့ဖျက်ဆီးခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုငါမှတ်မိနေသေးတယ်။ ” ငါဆိုလိုတာကငါဟာဘယ်အမျိုးသမီးကိုမဆိုဘယ်တော့မှယုံကြည်မှာမဟုတ်တော့ဘူး၊ သူမကကျွန်မတို့ချစ်တဲ့သူတွေပြသခဲ့လို့ကျွန်မကိုပြခဲ့တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်ရန်အရူးများ .. သူတို့ပဲ "အမျိုးသမီးများ" ဖြစ်နေဆဲ
လိမ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရှက်စရာကောင်းပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝဟာဝမ်းနည်းဖွယ်စစ်တုရင်ကစားပွဲဖြစ်လာတယ်၊ သူတို့ကအနိုင်ရတော့မယ်လို့ထင်ယောင်ထင်မှားယုံကြည်နေကြတယ်။ ငါကတော့မိန်းမတွေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအကြံဥာဏ်ကလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်၊ မှန်ကန်ပြီးမျှတရမယ်။ ငါတို့ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန် ... လိမ်ပြောနေတာ၊ ငါတို့အမှားတွေမှားမိတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဟာသားကောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်၊ ​​နောက်မှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့သူနဲ့ငါတို့မမျှတဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်နေတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကိုမိမိကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကိုယုံကြည်စေလိုသည်မှာ၎င်းသည်မဟုတ်ကြောင်း သိ၍ လုပ်ခြင်းသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရှေ့အရှက်ခွဲခံရသည့်“ လိင်ဂိမ်းများ” ကိုမမေ့ပါနှင့်! အဆင်ပြေသည့် fuck ဆိုတဲ့ဂရုစိုက်ပါ? ဂလားပင်လယ်အော်
အိန်ဂျယ် R. ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးလေးစားမှုနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက် - လိမ်ညာမှုကိုအမျိုးသမီးများသည်အလွန်ကောင်းသည်ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ၎င်းကိုဖျက်ပစ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ACT တွင်၎င်းကိုဖမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အချို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့။ နေဆဲ, သူတို့သည်အိုင်တီငြင်း။
သမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုရာ -“ မိန်းမသည်လိမ်လည်သူ၊ သူစားသည်၊ သူ၏ပါးစပ်ကိုဆေးလျှော်။ သူမစားဟုဆိုသည်»
ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုလိမ်နေရင်မင်းရဲ့ပြPROနာကငါ့ကိုဆိုးတဲ့ဘဝတစ်ခုပေးဖို့ဘာကြောင့်လဲ ... \_ t
Angel R. သို့ပြန်သွားရန်
ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီနောက်မှာကျွန်မသူ့ကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူကငါအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကိုအိမ်ထဲခေါ်လာတယ်၊ သူ့ကိုအလုပ်ကနေခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူကထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်၊ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ သူမတစ်ကိုယ်လုံးကိုယ်ဝန်ရလာသည်၊ ကလေးမွေးဖွားလာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်မကွာဝေးကြောင်းသတိပြုမိသည်၊ သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင့်အားဖြင့်သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောအပျိုကညာအားဖြင့်သူတို့သည်ငါ့သားဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ငါသူတို့ကိုသူတို့ကိုလုပ်ကြံခဲ့တယ်၊ ငါသူမကိုဒေါသထွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ရလဒ်တွေကိုငါမတွေ့ရဘူးဆိုရင်သူကငါ့မရှိခြင်းမှာသူနဲ့ပြmessနာရှိတယ်လို့ဝန်ခံရမယ်၊ ပြီးတော့သူဟာ dis သတ္တဝါတွေနောက်တစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ် မိဘတွေကမတူကြဘူး၊ ဒါကြောင့်အားလုံးပြီးသွားပြီ၊ ဒါကလိမ်သူလားဒါမှမဟုတ်တခြားအရာတစ်ခုလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး
ငါ့ရည်းစားကဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုငါလုံးဝလက်ခံတယ်၊ ငါမနာလိုဘူး၊ သူမကငါ့ကိုထက်ပိုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ရလာရင်သူမအတွက်တော့ပိုကောင်းမယ်၊ 🙂
ငါ့ကိုလိမ်စရာမလိုဘူး🙂 XD !!!!!!!
သူကကျွန်တော့်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြည့်ရှုရန်အရာခပ်သိမ်းကိုလုပ်ပေးတယ်။ ငါဟာယူဂျင်းတစ် ဦး ပါ။ သင်တို့နဲ့အတူအခြားလူနဲ့ဘယ်တော့မှအိပ်မပျော်ခဲ့ပါ ...
မင်းရဲ့ဝါကျထဲကတစ်ခုခုကမှန်တယ် ... မင်းကမင်းကအပျိုပဲလို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့မင်းနဲ့အတူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်တော့မှအိပ်မပျော်ဘူးလို့ပြောတယ် !!! အိပ်ရာဝင်ပြီ၊ သင်နှင့်အတူရှိနေလျှင်ပင်၊ သင်ကအပျိုစင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါက? ဟုတ်ပါတယ်၊ မစ္စတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူဟာအမှန်တရားကိုသိတယ်။
Juan Rios ဟုသူကပြောသည်
၂။ မိန်းမသည်လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်းများစွာကသေဆုံးပြီးဖြစ်သောဆွေမျိုးတစ် ဦး ၏ဈာပနအခမ်းအနားကိုတီထွင်သည်
၃။ - မိန်းမကသူမ၏ပြုမူပုံသည်မည်သူမျှမပြောင်းလဲဟုပြောသောအခါ
juan rios သို့ပြန်သွားပါ
မင်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့အကောင်းဆုံးအချက်တွေကိုငါတွေ့တယ်၊ မင်းကရက်စွဲတွေကိုမေ့သွားတယ်၊ မင်းကိုသတင်းအချက်အလက်တောင်းခံတာကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအပြိုင်အမှန်တရားကိုဖန်တီးတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကမင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုပြပေမယ့်မင်းကငါ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး သူ၌မှားယွင်းစွာတောင်းပန်ရန်ဘာသာတရားတစ်ခုကိုချဉ်းကပ်သည်၊ သို့သော်သူ၌ဝှက်ထားသောအရာများကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ သူသည်မည်သူမည်မျှသိသည်ကိုသူသိနိုင်သမျှသိနိုင်သည်။ သူနှင့်သူမအနေဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏မိခင်ကိုကျိန်ဆိုရန်မဟုတ်ပါ၊
ဟုတ်တယ်ဆိုရင် မိုင်းကခေါင်းကိုဖျားနေပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတောင်လိမ်ပြောခဲ့တယ်။ ငါမကြာသေးမီကအတူတကွတည်ရှိအတွက်ကိုမြင်လျှင်, ကံကောင်းတာကကအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ရထားပေါ်ကနေနင်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်အမျိုးသမီးများရှိသည်။ လှည့်စားခြင်းအနုပညာသည်အမှားများနှင့်မအောင်မြင်မှုများကိုမ ၀ န်ခံသောနေ့ရက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွင်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်သင်၏ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးသည်ဤဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့အားနည်းနည်းလေးမှပါဝင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှုပ်ထွေးမှုလုံးဝမရှိစေသည့်အရာများအားခြိမ်းခြောက်နေသောအကြည့်ကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားလိမ်လည်သည်။ သက်သေသာဓကများရှိပါကမည်သည့် ၀ န်ထမ်းမှဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
Lolo ရုပ်ဆိုး ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်၊ Lola Bella ... ဒါကဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့၊ ချစ်စရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှသင့်ဘ ၀ ဟာလိမ်ညာမှုတွေနဲ့သာသက်ဆိုင်ပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှသင့်ရဲ့အဆိပ်ထဲ၌ယိုယွင်းနေသောအဆုံးသတ်ဖြစ်လာသည်။ သင်၏စွမ်းအားကိုမဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်မရှိဘဲနှင့်သင်၏ယုံကြည်အားကိုးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိဘဲအဆုံးသတ်သည်အထိသင်၏ကျဆင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်ဟုပင်သင်မမြင်နိုင်ပါ။ ထို 'lola bella' ဂိမ်းကိုဆက်ကစားပါ။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာမင်းကခင်ဗျားဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါလိမ့်မယ်။
awly lolo အားပြန်ပြောပါ
Lola; မင်းကအပြင်ဘက်မှာဘယ်လောက်ပဲလှပနေစေကာမူထိုသဘောထားကိုပြုကျင့်သူအားလုံးမည်သူမဆိုမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သူတို့သည်သင်ထင်သည်ထက်စောလျင်စွာသင့်ကိုနာကျင်စေမည့်မရပ်မနားငိုကြွေးမည်ဟုသတိပေးလိုက်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောလမ်းလွဲမှု။
သငျသညျလိမ်လည်သူတစ် ဦး ၏ဂိမ်းထဲသို့လည်းကျသွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်ကမွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး လှလှပပအိပ်မက်လှလှလေးနှင့်အိပ်ခဲ့ရသည်၊ ရေချိုးသည်၊ အိပ်ခဲ့ရသည်၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဖြတ်တောက်သောမုသာကောင်နှင့်အတူငါသူပြုခဲ့သူ၊ သူဟာတောင်မှသူမသတိမထားမိဘဲမိန်းမများကသူတို့က "bastards" လို့ထင်ရင်ငါတို့နှစ်ကြိမ်လှည့်ပတ်သွားပြီ။ သူမကစိတ်ရင်းမှန်နဲ့၊ မင်းအတွက်ဆိုးရွားသွားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဘယ်တော့မှဒီနည်းကိုမလုပ်ပါနဲ့ အခြေအနေများ lol ။
မိန်းမတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်တာဟုပြောဝံ့သူသည်အရူးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပေးဆပ်ခြင်းသည်အလွန်မှန်ကန်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ ကွာရှင်းထားသောမိန်းမနှင့်ကျွန်ုပ်အိမ်ထောင်ပြုနိုင်သလားဟုဘုရားသခင်အားမေးမြန်းသောအခါသမ္မာကျမ်းစာကိုကျွန်ုပ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ သူသည်လမ်းပေါ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုပြည့်တန်ဆာထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူမဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ငါပြောသောသူတို့အားအမျိုးသမီးများအားလိမ်လည်ခြင်းအားအကြံပြုလိုသည်။ ထိုဆက်ဆံရေးကိုထာဝရအဆုံးသတ်ရန်ပိုကောင်းသည်။ အကယ်၍ မုသာကိုခွင့်လွှတ်လျှင်သူတို့ကနောက်ထပ်လိမ်မှုများစွာကိုဆက်လက်ခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်ကိုကြောက်ရွံ့မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိမ့်မည်။ မိန်းမသည်သစ္စာမဲ့သူဖြစ်ပြီးသူမတွင်အိမ်ထောင်များစွာရှိသည်။ လူတိုင်းတွင်သစ္စာမဲ့ကြက်ဥခွေးဖြစ်လိမ့်မည်။
ယုံကြည်မှုဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရဲ့လုပ်ရပ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါထင်တာကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာမိန်းမတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်ရင်းသူမရဲ့အပြစ်အနာအဆာလေးကိုသဘောပေါက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမိုက်မဲလာတယ်၊ လျစ်လျူရှုထားကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ သို့မဟုတ်အိပ်ရာ session နဲ့ကုသ။ ဒီခံစားချက်ပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့သဘောထားတွေကိုငါတို့စတင်သတိပြုမိလာတယ်။ တချို့ကအရမ်းအပြစ်မဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ပိုကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့်ဘာသာရပ်ဟာမနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါအမျိုးသမီးကလိမ်ပြောတာဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးယန္တရားအဖြစ်။ ငါလိုသူတွေကိုရှာပြီးတိုင်ကြားသူတွေရှိတယ်။ အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့မုသားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရတာဟာအလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိူင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန ဦး မှာလိမ်ညာမှုတွေရှိနေရင်၊ သူမဒေါသထွက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ငိုသံ၊ ကျိန်ဆိုခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးပြည့်စုံသော Idiots ဖြစ်ကြသည်။ သူသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်ဆံမှုကောင်းခြင်းအတွက်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မေးခွန်းထုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကတိပေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက်အချိန်အကြာကြီး (ကျွန်ုပ်တို့တွင်သက်သေအထောက်အထားများ ရှိ၍) စစ်မှန်သောစစ်ဆေးမေးမြန်းသူဖြစ်ပါကထိုအမျိုးသမီးသည်အလွန်ဒေါသထွက်ကာထွက်ပြေးရန်ဆန္ဒရှိမည်၊ သို့မဟုတ်သူမအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငို။ ရဲရဲစိတ်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေရန်မီးခိုးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ။ ရလာဒ်နှစ်ခုရှိလိမ့်မည် - ရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသည်အလွန်လေးနက်သောကြောင့်သူမအနေဖြင့်သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူမရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ဟုခံစားရသည့်အခါသူမခံစားခဲ့ရသောကြောင့်သူမလုပ်ခဲ့မည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ ၁ တစ်ယောက်တည်း၊ ၂ ရှုပ်ထွေးသည်၊ ၃ သူသည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုယုံကြည်ပြီးပျက်ကွက်ခဲ့သည်၊ ၄ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ဘက်မှရပ်တည်ခဲ့သည်၊ ၅။ ငါတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေချင်ပါ၊ ၅ သူမကငါတို့ကိုအသရေပျက်အောင်ကျိန်ဆိုပြီးကျိန်ဆိုသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ခိုလှုံရန်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ၆ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနှုတ်ဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုဖြင့်တုန့်ပြန်သည်၊ ၇ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ဟန်ဆောင်မှုကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးသူမကိုမယုံသင်္ကာပြုခြင်းကြောင့်မည်သည့်အခါမျှခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၈ မာဂဒလနာကဲ့သို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းပါ၊ သူမအမေကိုကလေးများအားကူညီ။ အမှန်တရားကိုလက်မခံပါ ၉ သူမသည်သူမကဲ့သို့တူညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုက်မဲသည်ဟုခံစားစေသည်။ သို့သော်သူ၏တင်ပါးသို့မဟုတ်သူမ၏ကောင်းကင်တမန်မျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ကြည့်ပြီးထိုက်တန်သောအမျိုးသမီးများကိုလျစ်လျူရှုသည်။ ၁၀ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ဦး အားယုံကြည်မှုရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နောင်တရပြီးနာကျင်ခံစားရပြီးအထီးကျန်ဖြစ်နေပြီး“ အမျိုးသမီးအားလုံးတန်းတူဖြစ်သည်” ဟုယုံကြည်ကြသည်။ (အမျိုးသမီးများအတွက်အချို့သောအမြင်များကိုရှင်းလင်းချက်) ရှင်းလင်းချက် - မိန်းမများစွာသည်များစွာသောမိန်းမများရှိကြသော်လည်း၊ ကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမခေါ်ပါ။
hooo မာစတာ haha
အရာအားလုံးပြောတာမှန်ပါတယ် .. တူညီတဲ့အဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် .. စမ်းသပ်မှုတွေပြီးသွားရင် .. ငါ့ကိုငြင်းပယ်လိုက်တယ်။ သူကကွဲသွားတယ်၊ ငါဘ ၀ မှာလုပ်ခဲ့သမျှတွေအများကြီးကိုယူခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါသူမမှန်ကန်တာကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ သူမကလှတယ် .. ဒါပေမယ့်ငါချစ်တဲ့သူတွေကပိုပြီးအဆင်းလှတာပေါ့ .. ငါ .. အရာရာတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက် .. ငါအရာရာကိုလိုက်ရှာတယ် .. ငါကသူ့ကိုကန်တယ် .. မိန်းမတစ်ယောက်လားငါတို့ shit လုပ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်တယ် .. သူတို့အားလုံးဟာ client တစ်ခုတည်းကနေပိုက်ဆံပေးသူတွေဖြစ်တဲ့ El Husband ။
အော်စကာ Juarez ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်အဖြစ်အပျက်ဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်မဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချခဲ့တယ်၊ မတူနိုင်တဲ့အလှတရားရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်သူမဟာကလေး ၂ ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမပြောတဲ့အတိုင်းငါဟာငါ့ဘဝအတိုင်းအတာအထိချစ်ခင်စွဲလမ်းခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ (သူမ (၂ လခြားပြီး)) သူမရဲ့ယောက်ျားနှင့်ခွဲနေပြီးသူမနှင့်အတူရှိနေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူမ (၂ လခြား) ကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်မှအလုပ်မှထွက်ခဲ့ပြီးသူနှင့်အတူရှိရန်မြို့တွင်နေထိုင်ရန်သွားခဲ့သည်။ သူမမြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူမကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်။ သူ့မိဘတွေ၊ သူ့ခင်ပွန်းကငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းသူပြောခဲ့တာတွေအားလုံးဟာလိမ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမခင်ပွန်းနဲ့လုံးဝကွဲကွာသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ မြို့တော်အတွက်သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား .. တစ်ချိန်တည်းမှာသူကသူသည်ငါ့ကိုချစ်သောသူ !!!! ငါ့ကိုရှင်းပြပါ! ?? နောက်ဆုံးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကသူကိုချစ်ကြောင်းပြောတယ်၊ ငါသူ ၂ ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ် ?????? ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာကျွန်မအတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါအရက်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့မေ့သွားတယ်။ ငါသူ့ကိုထားခဲ့တယ်။ သူမမှာကလေး ၃ ယောက်ရှိတယ်။ တတိယမြောက်ကလေးကငါ့သားပါ။ ငါဟာ ၁ နှစ်သားဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုငါသိချင်တယ်ငါသူ့ကိုမသိချင်ဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူမရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အရာတစ်ခုခုရဲ့ရလဒ်ပဲ။ ငါဟာမကောင်းတဲ့သူ၊ လိမ်ညာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်။ သူမကျွန်တော့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲ၊ ငါ့ကိုပေးခဲ့တာတွေအားလုံးကိုသူမပြောပြသမျှကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သူမအတွက်အရာရာတိုင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တယ် .. သူတို့ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြတာပါ ..။ ငါ့ကို .. သူမကဆိုးတယ် .. တပ်မက်တယ် .. ငါဘာထပ်ပြောရမလဲမသိဘူး
Oscar Juarez အားပြန်ပြောပါ
ငါနေထိုင်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုသူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်ကြည့်ပါ။ သင်ဆွေမျိုးဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးသင့်သည်၊ သင်အဖေ၊ အမေ၊ အစ်ကိုများ၊ ဦး လေးများသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများလားစသဖြင့်သင်သိသင့်သည်။ မျှဝေခြင်းသည်၎င်းကိုတွေ့မြင်။ ကူးယူခဲ့သူတစ် ဦး ထံမှဖြစ်ကြောင်း၊ ထူးဆန်းသောအရူးအမူးဖြစ်လို။ ထူးဆန်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောခံစားချက်ရှိသောမြင့်မြတ်သောစုံတွဲများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ကံမကောင်းပါ၊ သူငယ်ချင်း၊ ဤအမျိုးသမီးများသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်။ မရင့်ကျက်ပါ၊ သင်ပိုက်ကွန်ကိုသိသည်။ သူမသူငယ်ချင်းနှင့်ဝေးကွာနေပြီးသင်၏လေ့လာမှုကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါစေကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ။ PS .. ငါနေထိုင်ခဲ့သည်။
ငါ RAMA2012 ပေးသည့်အကြံဥာဏ်နှင့်သဘောတူပါသည် ထိုသို့သောမိန်းမသည်ယောက်ျား၏ဘ ၀ ထဲသို့ဝင်သောအခါ၊ အော်စကာ, မိန်းမကောင်းရှိပါတယ်, အနည်းငယ်ပေမယ့်ရှိပါတယ်။ အချိန်ပေးပါ၊ သင်အချို့နှင့်တွေ့လိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သင့်ကိုကာယပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ သင်၏အလုပ်ပြန်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်းများသို့ပြန်သွားပြီးသင်၏ဘဝကိုနေထိုင်ပြီးတစ်နေ့တွင်သင်၏သားသည်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရွယ်ရောက်ပြီးရင့်ကျက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသူသည်သူ၏ဖခင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပါ။ သင်၏လက်၌သင့်ကိုငါကြီးပြင်းသောသူ၊ ကျန်းမာသောသူ၊ ယခုမှ စ၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါ၊ ထိုအချိန်ရောက်သောအခါ (အချိန်ယူလျှင်ပင်) သင်သည်ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်သည်။ ပွေ့ဖက်အိမ်ထောင်ဖက်!
သူမ၏ hehehehe မိတ်ဆက်ပေး
John cordova ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ညီ၊ မင်းလိုမင်းလိုသက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းသိကျွမ်းရမယ်၊ ပွေ့ဖက်ပြီးကံကောင်းပါစေငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
Jhon Cordova ကိုစာပြန်ပါ
ငါထင်တာကတော့မိန်းမတွေကသူတို့ကိုလိမ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါတို့ကငါတို့လိမ်ပြောနေတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာကိုပြောတာလို့သူတို့ပြောတာကသူတို့မိန်းမတွေရဲ့အားသာချက်ကိုယူတာပဲလို့ငါတို့ထင်တယ်။ တခါတရံအမျိုးသမီးများသည် ၀ မ်းနည်းပူဆွေးကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကတူညီသောအခြေအနေများတွင်ရှိခဲ့လျှင်သူတို့ကမျက်နှာကွဲကွဲနေပြီးအခြားတစ်ခုမှာသင်သည်သူတို့အားတစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်လျှင်၎င်းတို့အားအရာရာတိုင်းရှိသည်ဟုမထင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာမထားဘဲတစ်ခါတစ်ရံအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အနိုင်ရပါ။ လူတွေကမင်းဘာကြောင့်သူဘာကြောင့်မျက်နှာဖုံးကိုဘာကြောင့်ချိုးဖောက်ရတာလဲလို့မေးတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အမှန်တရားကတော့ငါထင်တာကအဲဒီလူကိုစွန့်ခွာဖို့ပဲ။ ငါမထိုက်တန်ဘူး၊
လိမ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည် သူမရည်းစားနှင့်အတူလမ်းမလျှောက်သောမိန်းမသည်မင်းမှာ xq နောက်တစ်ခုမှကံကောင်းရန်လိုသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ကောင်းသောမိန်းမများရှိသည်ဟုထင်လျှင်၊ လိမ်လည်သူများကသူတို့ကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ဘုရားသခင်အားအကောင်းဆုံးဟုပြောရန်မလိုပါ။ ။
ငါ့အိမ်သို့ခေါ်ဆိုခြင်း၊ အိမ်တွင်ကောင်းမွန်သောကုသမှု၊ အီးမေးလ်စသည်။ ရုတ်တရက်သူတို့ပျံ့နှံ့စတင်ခဲ့သည် .... ။ ထို့နောက်သူက "စီးပွားရေးမှအလုပ်" ကိုခွဲထားရမည်ဟုပြောခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူဖော်ပြသည့်အပြုအမူကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူမသတိမထားမိဘဲသူမသည်သူမ၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး“ စတိုးဆိုင်သို့အလျင်အမြန်ခရီးစဉ်များ” သည်သူမ၏လက်ရှိနှလုံးရောဂါနှင့်တကယ့်ကိုခဏတာတွေ့ကြုံနေရသည်။ အဲဒါကကျွန်မကိုလက်ခံဖို့သတ္တိအများကြီးပေးခဲ့ပေမယ့်လည်းမှတ်မိသေးတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူမအားလပ်ရက်မှာသူမနဲ့အတူနေခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးသူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းရဲ့အိမ်မှာနေဖို့ပြောခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်မူကြမ်းအတိုင်းလိုက်နာစေချင်ပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ငါဟာအလုပ်ဆက်ဆံရေးကိုလိုက်နာချင်တာတောင်မရှိတော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာ“ ဆက်ဆံရေး” ကိုငရဲသို့ပို့ခြင်းမှရက်အနည်းငယ်ကွာဝေးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, အဘယ်သို့သူ့ကိုပညာရှင်ပီသစွာလုပ်နေမှသူ့ကိုတားဆီးလိမ့်မည်နည်း ဘာမှမ
ငါသည်လည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအလားတူအရာများငါသိ၏။ ဤသည်သည်ယနေ့လူသုံးများသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ လက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသောအခါသူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူရဲဘောများဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်အမျိုးသားများလည်းအလားတူပြုမူနိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။ စုံတွဲ၏သစ္စာမဲ့သောအစိတ်အပိုင်းသည်ထိခိုက်နစ်နာသောအစိတ်အပိုင်းကိုမထိခိုက်စေရန်တခါတရံပြtheနာတိတ်ဆိတ်သွားသည်၊ သို့သော်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်အတူပြproblemနာပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ အခြားအချိန်များ၌သစ္စာမဲ့ပါတီသည်သူတို့၏ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမဆုံးရှုံးစေလိုပါ။ ၎င်းသည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုမသိဘဲကိစ္စတစ်ခုကိုသာရှာဖွေနေသည်။ ထို့အပြင်ဖောက်ပြန်မှုသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကိုခံစားနေရသူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလျှင်၎င်းကိုခံစားနေရသူ၏ (သို့) လှုံ့ဆော်သူအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်တွင်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခံစားချက်များမရှိဟုထင်မြင်ကြပြီးအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်မမြင်ဘဲထိုစွန့်စားမှုအမျိုးအစားများကိုမျက်မမြင်များဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်စတင်လေ့ရှိကြသည်။ အကြိမ်များစွာသူတို့သည်အလွန်မိုက်မဲသောကြောင့်သူတို့၏ချစ်မြတ်နိုးရသူအားသာချက်သို့မဟုတ်ရယ်မောခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်ကိုတောင်မသိကြပါ။ သူတို့ထဲက။
လူတိုင်းကသူတို့ဘ ၀ မှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်လွတ်လပ်သည်။ မင်းကိစ္စမှာမင်းဟာဆက်ဆံရေးကိုပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးသူမဘ ၀ နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကောင်းလဲ၊ ပိုဆိုးလားဆိုတာကိုသူမဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သူမနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားဆက်ဆံပါကသူမအားအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမပြုပါနှင့်၊ အကယ်၍ သင်သူမကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းသူမကိုနားလည်စေပါကသူမသည်သူမ၏လက်ရှိစွန့်စားမှုပျက်ကွက်ပါကသင့်အားသူမအနားတွင်ပြန်လည်နေရာချထားရန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်မင်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်မံနေရာချထားလိမ့်မည် သူမ။ သင်၏ပြandနာကိုသင်အလေးထားမှု နည်း၍ သင်၏ဘဝနှင့်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကို ပို၍ အရေးမကြီးလေလေအခြေအနေကို ပိုမို၍ လျောက်ပတ်စွာရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ယင်းကိုအနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်တွင်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင်၏ဘဝကိုဖြတ်ပြီးသင့်အားဘဝကိုအရောင်ပြောင်းစေလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ သူမတွေ့ရှိခဲ့သည့်ခင်ပွန်းဟောင်းကသူမအမှားကိုစတင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအထောက်အကူမပြုနိုင်ဘူး၊ သင့်တံခါးကိုခေါက်ဖို့နောက်ထပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစောင့်ပါ။ အချိန်တန်ရင်သင့်ကိုတူညီတဲ့အကြွေစေ့နဲ့သစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုကံကြမ္မာကတွေ့လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်း, သင်၏တွေ့ဆုံ, သင့်ပုံပြင်များမေ့လျော့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သူမသည်သင်၏ဘ ၀ ကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကသူမ၏အကျိုးဆက်များကိုသူမအားလက်ခံပါစေ။ သငျသညျကြားဝင်ကြဘူး, အကြွင်းမဲ့အာဏာတိတ်ဆိတ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုသွားပြီးအဲဒါကိုနာကျင်သလောက်လျစ်လျူရှုပါ။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းကိုမထိုက်တန်ဘူးဆိုတာမင်းသိမှာပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့အမှု၌, သတ္တုတွင်းငါသည်လည်းအစမှစ။ ပါတီဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သာမန်အရာသာလိုအပ်ချက်ထဲက, သူမကောက်သောသူမဟုတ်, သူမသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအမှုအရာနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်ငါတစ်ခုခု ချိန်းတွေ့ပြီးနောက်4လယခုထွက်ရှာတွေ့ကြ၏။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လကကျွန်တော်တို့ကို ၂ နှစ်ကြာအောင်ချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်။
အခုငါအရမ်းဆိုးနေပြီ၊ နှစ်ကုန်မှာပcrisisိပက္ခတစ်ခုလုံးစတင်ခဲ့တယ်။ ငါမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့သူ့ကိုငါမပြောသေးဘူး၊ သူကသူမလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါသူနဲ့စကားပြောတာ၊ သူကသူ့ကိုစကားပြောနေခဲ့တယ်။ သူသည်ဆေးခြောက်အတူတူဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်လည်းစကားပြောခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ သူနှင့်သူ၏အခန်းဖော်ထွက်ခွာသွားသည့်နေ့များနှင့်အချိန်များကိုသူတို့သဘောတူခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအခြိနျအထိသူမပွောငျးလဲပါ။ သူကပါတီပွဲတွေဆက်လုပ်နေတုန်းသူက“ သူဟာကောင်းမွန်စွာပြုမူနေတယ်” လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်မကိုမတွေ့ရဘဲတောင်မှဘာမှမယုံကြည်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ငါအကုန်လုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကင်ပိန်းကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ၊ ငါပြောပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးကိုငါတွေ့ခဲ့တာကအရမ်းဆိုးတာပဲ။ သူမဟာသူမကိုအရမ်းထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်တယ်၊ သူဘယ်လိုဖုံးကွယ်ထားတယ်၊ ဆိုးဆိုးရွားရွားနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရပ်များအတွက်နောင်တရစေပြီးပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အမှန်တရား၊ ငါ့ကိုထိမိသည့်သတ္တုတွင်း၏အရူးအမူးများစွာ
ချစ်လှစွာသောဂျူနီတိုတို နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိန်းမတစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့တစ်နေ့တာဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမျက်မမြင်တွေကိုအချိန်ယူပြီးသူမဘာလုပ်နေလဲ၊ သူဘယ်သွားနေလဲ၊ ဘယ်သူနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူးဆိုရင်သူမမှားယွင်းတဲ့အဆင့်တွေရောက်နေပြီဆိုတာသေချာပါတယ်။ သင်ဟာပါတီ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့သလဲဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပေးနေခြင်းဖြင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသူ၊ မင်းကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်၊ စစ်မှန်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလိုချင်တယ်။ ငါဟာမင်းရဲ့အခြေအနေမှာအလွန်တိကျတဲ့အရာဖြစ်မယ်။ ငါဟာအလားတူအရာတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီးပြီ။ သင်ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရှိပြီးအလုပ်လုပ်ချင်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်နာကျင်သော်လည်း၊ သင်သည်“ ရန်သူနှင့်အတူထွက်သွား” ကြောင်းငါပြောပါရစေ။ ဆင်းရဲသောမိန်းကလေးသည်သူမ၏အမူအကျင့်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးသင့်အားမထိုက်တန်ပါ။ သူမ၏ထွက်ခွာ !! မကြာမီသင်၏ဘ ၀ တွင်ပေါ်လာတော့မည့်ထိုလှပသောမိန်းမပျိုလေးအားသင်ဆက်ကပ်အပ်နှံနိုင်သောမကောင်းသောအချိန်ကာလများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်တန်ဖိုးရှိသောဘဝအချိန်ကာလများစွာကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးကယ်တင်ပါ။ ရွေးချယ်သည့်အခါသတိထားရန်သတိထားပါ။ လှပသောခြေထောက်များ၊ လှပသောရင်သားများနှင့်ကောင်းကင်တမန်များ၏မျက်နှာများအားလုံးမထိုက်တန်ပါ။ မိန်းကလေးကိုသူမချစ်ခင်သိကျွမ်းရန်အချိန်ပေးပါ၊ သင်နှင့်သီးသန့်လိုချင်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြပါ။ ကတိကဝတ်နှင့်သင်အတူတူပူဇော်ကြသည်။ ဘဝ၌ကံကောင်းပါစေသူငယ်ချင်း။ တက်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်မရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ကိုပြောပြတယ်။ မိန်းမတွေလိမ်တယ်ဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်တော့်ဇနီးပါ။ မကြာသေးမီကသူမအပြုအမူမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါသတိထားမိလာတယ်။ ဝေးကွာလွန်းတယ်၊ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးဟာယိုယွင်းခဲ့တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာသူအမြဲတမ်းနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ နေရာတစ်နေရာလုံးမှာနာကျင်ခဲ့တယ်။ acsedia လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါနေရာအတော်များများမှာမသက်မသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူမမိခင်ကိုဖုန်းဆက်ရန်စတိုးဆိုင်သို့ထွက်ပေါက်များစွာကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ သူမသူမကိုဆဲလ်ဖုန်းဖြင့်ခေါ်။ သူမညင်သာစွာဖြေကြားပြီးအိမ်အပြင်ဘက်ထွက်လမ်းကိုရှာပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီသို့ထွက်သွားသည်။ အချိန်ကောင်းကောင်းယူပြီးပြန်လာသည်။ သူကငါပြောတဲ့ဝတ်စားဖြီးလိပ်စာတောင်းပန်တဲ့သူငယ်ချင်းလို့ပြောတယ်။ သူမကိုယုံတယ်။ ငါသိသေးတယ်၊ သူမငါ့ကိုလိမ်ပြောနေတာလေ။ တစ်နေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတီဗီရှေ့မှာထိုင်နေကြတယ် ဖုန်းမြည်တုန်းကသူမ selu ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူမပြောခဲ့သည့်လက်စွပ်တစ်ခု၊ သူမဖုန်းပြောပြီးနောက်သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီးသူမသည်အစာအိမ်နာနေပြီးသူမရေချိုးခန်းသို့သွားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုမှမဟုတ်ကြောင်းရုတ်တရက်သတိပြုမိလိုက်သည်။ သူမကိုသတိကြီးစွာလိုက်နာလိုက်သည်နှင့်အိမ်သာဘက်သို့ရပ်လိုက်ပြီးအံ့အားသင့်မိသည်။ ဆဲလ်ဖုန်းပြန်လည်မြည်လာသည်။ သူမမြန်မြန်ဆန်ဆန်တံခါးပိတ်ထားလိုက်သည်၊ မိနစ်အနည်းငယ်မျှကြာသွားသည်။ သူမရေးသည်နှင့်စာရေးနေချိန်မှာသူမတိတ်တဆိတ်ဖြစ်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်၊ သူမလုပ်နေတာတွေကိုသူမဆက်လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ သူကငါ့ကိုသူမက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ပေးပို့သောအရာကို၏လုံလောက်သောသက်သေပြခြင်းနှင့်သူနှင့်အတူသူဆက်သွယ်နေသည်သူကိုအတည်ပြုခြင်းငှါအဘို့, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်ငါမမျှော်လင့်ဘဲရေချိုးခန်းသို့သွား။ သူ၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုယူ။ ငါ pt တွေ့ရှိခဲ့ ... ကောင်းကောင်းငါရှိခဲ့ပါတယ်တစ် ဦး သူမ၏ဆရာချင်းတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အများဆုံးဝက်သည်ငါ့ကိုဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့ရာကိုငြင်းဆိုခဲ့ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကိုယ်စားပေးပို့သည်ဟုရဲရဲရင့်ရင့်ပြောခဲ့သည်။ တစ် maest ၏လာရန် ရာကမယုံနိုင်ဘူး၊ … .. အခုသူမသစ္စာဖောက်မှုမရှိဘူးလို့ကျိန်ဆိုပြီးအခုဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာတစ်စုံတစ်ယောက်ကကူညီနိုင်ရင်ငါဘာလုပ်သင့်သလဲငါသူ့ကိုစွန့်ခွာ၊ အိမ်ကနေစွန့်ခွာသွားလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီလား။ သူမ၏နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက် ... ကိုလံဘီယာ guevaa
မိတ်ဆွေ၊ အမှန်တရားကတော့ငါသစ္စာမဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာ၊ ငါသူတို့သိပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေပါ။ သူတို့စိတ်ကူးကြည့်လို့မရဘူး။ မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူ့ကိုယ်သူဂရုမစိုက်တော့ဘူးဆိုရင် သူမသည်သင်ကိုဂရုမစိုက်တော့သည့်အပြင်အဆိုးဝါးဆုံးအရာမှာချစ်သူသည်လှပသောစကားစုများဖြင့်သာလှည့်ဖြားနေလျှင်…သူမသည်သင်မဲပေးသည်နှင့်သူသည်သင့်အားသစ္စာရှိရုံသာမကအချိန်အတော်ကြာတည်သည်။ သူမအတွက်မဲပေးပါ သူမသည်သူမကိုမုသားမသုံးသူ၊ ငိုတော့မည့်သူ၊ သင့်ကိုဒူးထောက်မည်၊ သင်ပြောမည်၊ သင်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အားလုပ်ပေးရန်အလွန်မြင့်မြတ်သောအရာအားဖြင့်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုတော့သည်။ နင့်ကိုငါချစ်တယ်ဆိုတာမြင်လိုက်ပါ၊ နည်းနည်းလေးကသူတို့သည်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသင့်အားပြောမည်ဆိုပါက ပို၍ ပို၍ ကောင်းသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသင်အမျိုးသမီးများမည်မျှရှိသည်ကိုအနည်းငယ်သိပြီးမုသာဝါဒီများ၏မေးခွန်းကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တရားနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆက်ထိန်းထားရန်သတိရပါ၊
ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲ၊ မင်းပြန်ကောင်းလာတာလား၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလား၊ ဒါပေမယ့်လိမ်ပြောတာကလူသားတွေရဲ့မူလရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။ သူတို့ကိုသင်များများအသုံးပြုလေလေ၊ သင်ကိုယ်တိုင်လည်းပိုမိုဖျက်ဆီးလေလေ၊ မိန်းမတွေအားလုံးသိသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ လှည့်စားခြင်း၊ သင်သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်ဟုစဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်မှန်ကန်သည်၊ ၎င်းသည်မမှန်ပါ၊
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၅ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ဤဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်မှားယွင်းသောသူဖြစ်ပါသည်။ ငါကွန်ပျူတာရှိဆဲလ်ဖုန်းတွင်အရာများစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမကိုစဉ်းစားပါ။ အရာရာတိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ သို့သော်သူကကျွန်ုပ်အားအရာရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်မှာအမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းစိတ်ရင်းမှန်သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မကသူဘာကြောင့်ဒီလောက်လုပ်ရတာလဲ၊ ကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူး၊ သူမဟာလီဒီဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေသူကကျွန်တော့်ကိုငယ်ငယ်ကတည်းကအတူနေခဲ့လို့ငါတွေ့ကတည်းကကတည်းက သူမကသူမပြောတာကသူမကကျွန်မမဟုတ်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုပြောပြပြီး၊ ကျွန်မဘယ်လောက်အထိကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိရင်ကလေးအတွက်အဖြေပေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းသူမကိုလည်းချစ်လို့ပါ။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှဒီစာကိုမလိုချင်ဘူး၊ ငါဟာတရားမျှတတဲ့လူပဲ၊ ငါဂီတနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ဟာတစ်ညလုံးထက်ပိုပြီးလုပ်ရမယ်၊ ငါအလုပ်ကနေလာပြီးကလေးကိုတွေ့ပြီ ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲ၌သာဤသို့ပြောလျှင်ငါလိမ်လည်သူများအားငါပြောသောတစ်ခုတည်းသောအရာကိုမပြီးဆုံးသေးဟုငါဆက်ပြောမည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်သူတို့ပိုင်ဆိုင်ရာများကိုသူတို့ဆုံးရှုံးသွားသည်အထိမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အိုးအရမ်းရုပ်ဆိုးသောအဆွေ။ ဒီဟာကသင့်ကိုကုန်ကျလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ချန်ထားခဲ့ ငါ dj တစ်ယောက်ပါ၊ ပြီးတော့ငါဟောင်းကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ သူမကငါ့ကိုပြုံးပြပြီးပြုံးပြသည်။ အရမ်းလှတယ်၊ ငါနဲ့အတူအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလှဆုံးမိန်းမ…ကံကောင်းချင်တော့ကျွန်မမှာကလေးမရှိခဲ့ဘူး။ သူမသည်အလွန်လှည့်စားတတ်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်နှင့်ပင်ကိုယ်သိစိတ်များစွာဖြင့်သူမအားသူမနှင့်အတူရှိနေခဲ့ပြီးအရာအားလုံးကိုလုံးဝမယုံကြည်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်မိသည်။ ဒီမိန်းမနဲ့တူကြောင်းဆိုင်းဘုတ်တွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကငါအိပ်ရာပေါ်ကနေမျက်စိကွယ်သွားပြီးအရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။
ငါ့မှာဘာရှိလဲ ငါရရှိသောသတ္တုတွင်းနှင့်အမြဲတမ်း cuckold ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလက်ခံ?
သို့မဟုတ်စိတ်ရှည်ပါ၊ သင်တစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်တွေ့သည့်နေ့ကနောက်တစ်ကြိမ်ယုံရန်ကြိုးစားပါ့မလား။
အကြံဥာဏ်၊ သူမကသူမထင်နေသည့်အရာမဟုတ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်“ မင်းမှာလည်းအမှားအယွင်းတွေရှိတယ်” ဟုပြောခြင်းအားဖြင့်သူမကိုသင့်ကိုအသုံးချခွင့်မပြုပါနှင့်။
နောက်တစ်ခုကမင်းလိုဂီတနဲ့ငါအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါက dj တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအသံလည်းလည်ပတ်နေတယ်။ အဲ့တာအပြင်ငါလေ့လာနေတာ။
ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုတစ်ခုပြောခွင့်ပြုပါ။ ကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာငါတို့လိုလူတစ်ယောက်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ မိမိကိုယ်ကိုချစ်သောအလွန်ဥာဏ်ကောင်းသောမိန်းမသည်ဝိသေသလက္ခဏာတူသူတစ် ဦး ကိုချစ်သည်။
အခြား - သင်၏သားကိုကာကွယ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်သူမနှင့်အတူမသွားပါစေနှင့်။
အမည်မသိ3ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကကျွန်ုပ်ကိုလိမ်ညာခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်သစ္စာရှိမှုကိစ္စများသာမက) ကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အခါကမျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သံသယမပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ ၅ နှစ်အရွယ်ရှိသည်၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်, အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရေခဲတောင်၏ထိပ်ပဲ။ ငါအရမ်းကြောက်တယ်၊ ငါမယုံနိုင်ဘူး၊ ငါဟာနှစ်အတော်ကြာစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ် (နှစ်ပေါင်းများစွာလိုခံစားခဲ့ရတယ်) သေချင်တယ်၊ လုံးဝစိတ်ပျက်ပြီးဘဝကိုစိတ်ပျက်ရတယ်။ သူမဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါတို့မရှိဘဲငါနဲ့ငါမရှိရင်ငါမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာဆက်ဆံရေး ၃ ခုရှိတယ်။ သို့သော်ထိုအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတိုက်ပွဲများနှင့်နာကြည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကကျွန်ုပ်တို့အားရောင်ပြန်ဟပ်ရန်၊ တွေးမိရန်၊ မာန်မာနထောင်လွှားရန်မိမိကိုယ်ကိုနိမ့်ကျစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကုထုံးကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီး၊ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး၊ လေးစားမှု၊ ငါဘယ်တော့မှအသိအမှတ်မပြုဖို့ဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ဘူးတဲ့အမှားတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်၊ ကျနော်တို့အောက်ခြေကိုရောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီကနေအခြားရှုထောင့်နဲ့ကြည့်ပြီးအတွင်းထဲကြည့်လိုက်တယ်။ အခုငါတို့လက်ထပ်လိုက်ပြီ၊ ငါတို့မှာလှပတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ တစ်ခုက ၅ ယောက်က ၂ ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ဖို့သင်ယူခဲ့ကြရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရန်ဖြစ်တတ်ပေမယ့်အရာရာကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြောဆို၊ အခုငါတို့လုပ်ရပ်တွေကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိနေတယ်၊ ​​လိမ်ညာမှုနဲ့ကိုင်တွယ်မှုတွေကိုပိတ်ထားတယ်၊ ငါသူ့ကိုပထမဆုံးလိမ်လည်သူအဖြစ်သာသတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့သူမကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိမ်တတ်ပုံကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ (ကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေ) အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည် (ကမ္ဘာကြီးသည်ရိုင်းစိုင်းပြီးဆိုးရွားလှသည့်လူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်) ယခုမူကား သူမဟာကျွန်မရဲ့မဟာမိတ်ကျွန်မတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ရန်သူလိုမဆက်ဆံခင်အခုငါတို့အရမ်းနီးကပ်နေပြီ။ သင်သည်သင်၏ဇနီးကိုချစ်မည်ဆိုလျှင်သူမနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါ၊ သူမမရှိခြင်းတွင်သူမကိုသတိမပြုမိဘဲသင်၏မျက်စိကိုဖွင့ ်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစွန့်ပစ်ပါစေနှင့်။ သင်တို့၏အမှားများကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိကျွမ်းဖို့ပိုကောင်းတယ်။ ငါတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလှည့်စားကြဘူး။ မင်းဟာကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကမကောင်းဘူး၊ ဒါကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ မင်းရဲ့ကိစ္စမှာမင်းကသူ့ကိုတကယ်လိုချင်တယ်၊ မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမမျှတဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်၊ သူနဲ့အတူပြောဆိုပြီးအတူတကွတိုင်းတာကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့မိန်းမဟောင်းကဆက်လက်ပြီးတော့သူမကိုထားခဲ့ပါ၊ သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းပုပ်ပျက်သွားအောင်လုပ်ပါ၊ တခါတရံလူတွေကကင်လုပ်ခိုင်းတာကိုမရပ်ဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားသူများကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသကဲ့သို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသူတို့ကိုမျှဝေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော့်မှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးကတော့သူမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူရဲ့တူလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် သူမသည်ဖျက်သိမ်းလိုသော်လည်းကလေးကိုဂရုစိုက်မည့်အခြေအနေနှင့်တားဆီးခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူအမှန်တရားဆိုတာသူ့သားပဲဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။
ထို့နောက်မိန်းကလေးတစ် ဦး ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမမျက်လုံးဖြင့်ယုံကြည်လိုက်သည်ဆိုပါကသူမသည်အလွန်စင်ကြယ်ပြီးအပြစ်မဲ့သူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်၊ သူမသည်ယင်ကောင်ကိုမသတ်ခဲ့ပါ၊ သူသည်ကျိုးနွံမှု ရှိ၍ ကျွန်ုပ်အားအနည်းငယ်နမ်းခြင်းကိုမလိုချင်ခဲ့ပါ , ဒါပေမယ့်တစ် ဦး disco မှာပါတီပွဲပြီးနောက်တစ်ည, ငါသူတို့ Coca ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် orgy ခဲ့ရှိရာသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူတိုက်ခန်းသို့သွား။ ဟားဟား, ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရှိခဲ့သည်, သူကဒီအကြောင်းပြောပေမယ့်ငါအမြဲနှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည် သူဟာဟဟားဟားကို“ ဖြစ်ခဲ့ရင်” ဆိုတဲ့သံသယ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနောက်မှာငါဂျပိန်အမျိုးသမီးကိုပျံသန်းစေခဲ့တယ်။ သူမတောင်းပန်တာကအသုံးမကျဘူး၊
အခြားသူများအနက်မှလှပသောပါးလွှာသောသူမသည် Credit ဘဏ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသော်လည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းသောအခါသူမကသူမကို Lima ဆင်ခြေဖုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ချင်သောကြောင့်ထိုနေ့တွင်နုတ်ထွက်ကြောင်းပြောခဲ့သည် သူမမှာသူမမှာချစ်သူမရှိ၊ ချစ်သူလည်းမရှိပေမယ့်သူမအတွင်းပိုင်းကိုမကြာခဏသွားလေ့ရှိပြီးသူမရဲ့သူငယ်ချင်းများနဲ့မကြာခဏထွက်လေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်ယခင်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြောင်းကြာမြင့်စွာကတည်းကသိခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူမအမြဲငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့သူမ Facebook မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်သူမအားဖမ်းမိခြင်းဖြစ်သော်လည်းသူတို့ကဖော်ရွေသောစကားပြောဆိုမှုများသာဖြစ်သည်။ အခုသူမကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သူမဆီမှာဆဲလ်ဖုန်းအဟောင်းကိုတွေ့ပြီ၊ ငါ၌ကလေးငယ် ၂ ယောက်ရှိတယ်၊ ငါမအဆုံးသတ်ချင်ဘူးဆိုတာသူမအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမင်းကိုသင်၏ Facebook နှင့်သင်၏အီးမေးလ်များကိုငါစစ်နိုင်သေးသေးသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဟာဒီလိုမျိုးအိမ်ထောင်ရေးပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါလိမ်မယ်ဆိုရင်ငါသူ့ကိုထားခဲ့လိမ့်မယ်
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်ဖြေဆိုသောမိန်းမအချို့သည်အလွန်အမင်း chingonas များခံစားကြရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့အဆိုအရသူတို့သည်မည်သို့လိမ်ရမည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အမျိုးသားများထက်မုသာကောင်များနှင့်သစ္စာမဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းလက်ခံကြသော်လည်း၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ လိမ်လည်သူ၊ အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့အရာများစွာကိုတီထွင်တဲ့အမျိုးသမီးများ၊ မဟုတ်ရင်သူတို့ကလူဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါရည်းစားဟောင်းသုံး ဦး ကိုသူတို့ရဲ့မုသာစကားတွေနဲ့ဖမ်းမိခဲ့တယ်၊ တစ်ယောက်ကလူကိုယ်တိုင်ကူထားတယ်၊ နောက်တစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ pinocchio နှာခေါင်းတွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အသံသွင်းထားတာတောင်မှငါ့ကိုငါအရမ်းရယ်ရတယ်၊ ငါသူတို့ကိုအနီရောင်ဖမ်းရတာသိပ်ပျော်တယ် လက်မခံသောလူကြီးများကဲ့သို့သူတို့၏ဖောက်ပြန်မှုနှင့်လိမ်လည်မှုများကိုဘယ်သောအခါမျှလက်မခံသောအလွန်ဒေါသထွက်တတ်သည့်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုသူတို့၏ကြီးမားသောလိမ်လည်မှုတွင်ဖမ်းမိသောကြောင့်သူတို့သည်ယခုအချိန်တွင်လိမ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးမည့်သူများထက်လူပိုများသောယောက်ျားများပိုရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုလူဆိုးတွေကိုလိမ်လည်သူတွေအဖြစ်လူသိများလာအောင်သူတို့ကိုငရဲသို့ပို့မယ်။ နောက်ဆုံး၌လိမ်ညာမှုကိုလူသိများလာသည်။
ဟားဟားငါမှာသူမရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းသင်ကြားနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမနဲ့တွေ့ဖို့သွားမယ်၊ သူမလေ့လာမယ့်နေရာကိုသွားလည်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့သူမကကျွန်တော့်ကိုအိတ်နှစ်လုံးမခိုင်းဘဲကျောက်ခဲနှစ်ချောင်းနဲ့ချန်ထားလိမ့်မယ်။ ငါစကားလုံးတစ်ဝက်ယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး
ငါမိန်းမမျက်ရည်ကိုမယုံ ... လူတိုင်းသေဆုံးလျက်ရှိသည်
တချို့ကသူတို့မှာလက်ကိုင်ဖုန်းပြproblemsနာရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသင့်တော်တဲ့အတွက်၊ အဲဒါကိုမပြင်ဖို့ဆင်ခြေတွေရှာကြတယ်
အကယ်၍ မင်းသမီးကသူမရဲ့ jmmmmm ကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်မမေးမြန်းရဲတဲ့ဂရုစိုက်ဖို့သူတို့ဟာဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်ကြတယ်။ သင်က INQUISITING CHARACTER ရှိသင့်တယ်။
မှန်ပါတယ်။ ငါမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသဘောကျတယ်၊ ဒါကမကောင်းတဲ့၊ ငါတို့လိမ်တယ်ငါသိတယ်မကြာသေးခင်ကငါချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ငါစိတ်ထိခိုက်မိတယ် (ငါလိုမလား) ငါတို့မကြာခဏထွက်သွားကြတဲ့အတွက်ငါတို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ နမ်းလိုက်တာ၊ အနမ်းတွေနဲ့သူမကိုချစ်ကြပေမဲ့သူမမ ငါ့ကိုသာချစ်ခြင်းမေတ္တာပြ, တနင်္ဂနွေကောင်းတစ် ဦး ။ မကြာသေးမီကသူမသည်အခြားတစ်ဖက်သို့လှည့်ခဲ့သည်။ သူသည်အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နေသည်။ သူမသည်သူမနှင့် ပတ်သတ်၍ ရက်သတ္တပတ်များနှင့်သီတင်းပတ်များစွာဝှက်ထားခဲ့ပြီးမည်သူမျှစိတ်မဝင်စားဟုပြောခဲ့သည်။ စကားမစပ်သူမကကွာရှင်းထားတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကကျွန်မရဲ့အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ထားစဉ်သူမနောက်တစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ပါ။ ထို့နောက်သူမသမီးလေး၏ဖခင်ကိုလည်းပျံသန်းစေခဲ့သည်။ သူဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင့်ရဲ့အမြင်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်အတည်ပြုပြီးပြီ၊ သူတို့ထဲကအမှန်တရားကိုသူတို့ထုတ်ယူချင်တဲ့အခါသူတို့ကအဲ့လိုတုံ့ပြန်ကြတာပါ။ မိမိကိုယ်ကိုအရူးလုပ်လျှင်၎င်းသည် ဆက်၍ နာကျင်စေပြီး၎င်းသည်စိတ်၌စူးသောဆူးဖြစ်သည်။ Geez အချို့လူများနှင့်ဆက်ဆံရေးဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေး။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်း - ငါဟာသူတော်စင်မဟုတ်ဘူး၊ ရင့်ကျက်မှုမရှိတဲ့အတွက်လိမ်တယ်၊ လိမ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာနာကျင်တယ်။
Usc ဘယ်လောက်များများ Oscar ထိုမိန်းမနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ မိုင်းနှိုင်းယှဉ်ပါကနီးပါးပျော့ပျောင်းသည်။ ငါသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ၏ဇနီးဟောင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏နှစ်ပေါင်းများစွာသူငယ်ချင်းများ၊ သူသည်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူမသည်အခြားယောက်ျားနှင့်ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့ကွာရှင်းခဲ့ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်မကွာခင်သူမ၌သမီးလည်းရှိသည်။ ပျံသန်းဖို့အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့အဖေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ သူကငါ့ကိုရှာမယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လမ်းလျှောက်ထွက်မယ်၊ သောက်ကြမယ်။ အခုတော့သူကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသတိထားမိပြီးသူဟာငါ့ကိုရှာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုတွင်သူဘာကိုစောင့်မျှော်နေမည်ကိုမသိပါ။
HELLO MAURICIO မင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းကအဲဒီ့အရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မိသားစုကိုငါ့ဆီသို့အသံထွက်စေပြီးမိန်းမရဲ့နာမည်ကဘာလဲ
ပထမတော့အခြေအနေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲသွားတယ်၊ လူတွေတိုးလာတယ်၊ ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ မပျော်တဲ့မိန်းမကိုသတ်လိုက်တာကဆဲလ်ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးဖုန်းပျက်သွားတာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်၊ ငါ့ကိုလွှတ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်အတွက်သူမသည်သူမရဲ့စိတ်မကောင်းစရာမျောက်မျက်နှာကိုစောင့်ရှောက်ပါစေ။
အမှန်တရားကအရာရာတိုင်းမှာလိမ်ပြောနေတဲ့မိန်းမတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါနေတဲ့လူဟာသူမလိမ်ပြောတာကိုသူမနဲ့အတူငါတွေ့တယ်။ အမှန်တရားကငါ့အသက်မှာငါ့ကိုအရမ်းဆိုးစေတယ်ငါအသက်ရှင်ချင်တဲ့မုသားမဟုတ်ဘူး မင်းကိုလိမ်တာကိုကြိုက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ၊,,,,, တခြားအမျိုးသမီးတွေကိုငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ
ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးကတော့အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင့်အပေါ်မည်မျှပင်လျစ်လျူရှုထားပါစေ၊ သူမတည်ရှိသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲအမြဲတမ်းသတိထားမိလိမ့်မည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျက်စိကန်းစွာချစ်နေလျှင်၊ အမှန်တရားကိုတွေ့မြင်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ကပိုကောင်းအောင်လိမ်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသူတို့ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားလေးဒါမှမဟုတ်မိန်းမကလိမ်မပါဘဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ အထီးကျန်တာကိုခံစားဖို့ရှုတ်ချခံလိုက်ရတယ်။ နှင့်သစ္စာရှိမှုလေထုထဲတွင်သာထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကြသည်။
Dark Knight ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဖမ်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလုံးကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ညတွင်နေခဲ့သည်။ သူမကသစ္စာမရှိဘူး၊ သူမငါ့ကိုလှည့်စားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီမနက်မှာဒီစာမျက်နှာကိုမှတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ကြိမ်ချင်းဖတ်ပြီးပြီ။ သူမ။ ဤမိန်းမနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများအရသူမသည်ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုသစ္စာမဲ့ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရှိလိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲဒါကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်အခုအဲဒါကို unmask လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆုံးမှာငါငါ့အလိုရှိသမျှဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါ။
Dark Knight သို့ပြန်သွားရန်
ငါ GIRL နဲ့ (၇) လကြာအတူနေခဲ့ဖူးတယ်။ သူကိုယ်တိုင် LO မှတ်မိနေတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလိမ်ညာမှုငါထွက်သွားဖို့ပြောတဲ့အခါသူကတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့နေပြီလား။ ငါမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာငါနဲ့အတူနေဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ၂ လအကြာမှာအဲဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်နေ့တစ်နေ့လုံးအကုန်လုံးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ သူဟာတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောခဲ့တယ်၊ သူဟာသူရဲ့လက်တွဲဖော်ဖြစ်သူကိုသူပြောချင်တာကိုသူသိချင်တယ်၊ တစ်ချိန်ကသူသည် TLF၊ အခြားလူငယ် BoyfRIEND၊ မယုံကြည်သူနှင့်မုသာကောင်တို့အားအမြဲတမ်းစကားပြောဆိုသောသူနှင့်အခြားသူနှင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ့မုသားတွေအကြောင်းကျွန်မသိသွားတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရှင်းပြဖို့သူရဲ့အခြားကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်မဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ သူဟာအမေရိကန်ကိုလက်အောက်ခံယူပြီးလိမ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူပြောခဲ့တာကကျွန်မတို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ၃ ဝဝ ၃ ဝဝဝ ၃ ဝ ၃ ဝ ၃ ဝ ၃ ဝ ၃ ဝ ၃ ဝပြည့်နှစ်များအတွင်းအသက်ရှင်နေပြီဆိုတာကိုသူမသိခဲ့ဘူး။ ငါ တခြားယုံကြည်ချက်တွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ဒီအိုင်ဒီဒီလိမ်လည်မှုအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူဟာငါနဲ့မပေါင်းသင်းဘူး။ ငါဟာလိမ်ညာသူနဲ့တူတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူနှင့်အတူသူမကဲ့သို့အခြားသူမနှင့်အတူမသွားပါနဲ့, ငါနှင့်အတူသွားနေနဲ့ငါနေဆဲငါဒီနည်းကိုပဲငါ့ကိုဒီနည်းကိုပဲဒီအချိန် TIME ငါ၏အရည်ရွယ်ချက်များကွဲပြားနှစ်ခုရေဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည် မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာချစ်တယ် ။,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, အံ့သြစရာကောင်းတာကလိမ်လည်မှုနဲ့တူတဲ့လိမ်ညာမှုအသစ်တွေကိုသူပြန်ပြောပြတာကိုငါမသိခဲ့ဘူး။ လိမ်သူလိုလန်းဆန်းမှု ၈ ခုရှိပြီး ၈ လလုံးလုံးငါအိပ်ပျော်ဖို့ဆက်ရှိနေတယ်။ ငါကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့သူကသူ့ကိုပြောပြမယ်၊ ငါသူ့စာမေးပွဲများနှင့်မှန်ကန်သောပို့စ်များကိုပို့ပေးပါတယ်။ သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီပို့စ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့အထောက်အထားကအရမ်းကိုလိမ်ညာခဲ့တယ်ဆိုတာဒီသမိုင်းမှာလိမ်လည်မှုဟာဒီနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဟာလိမ်ညာမှုအားလုံးရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်။ အလွန်ကြာမြင့်စွာနှင့်ငါဒီမှာနှစ်ရက်ရေးသားခြင်းကိုယူလိမ့်မယ် ... သူလိမ်တဲ့အခါလမ်းဖြင့်, သူသည်သင်၏မျက်လုံးများသို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ဘာမှမသိဘူး။
mr rock အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ မင်းရဲ့အဖြေများအားလုံးဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာစကားပြောဆိုမှုကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာအရာအားလုံးစတင်ခဲ့တယ်၊ သူမကသူငယ်ချင်းဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီနောက်သူတို့ဟာဆဲလ်ဖုန်းပေါ်မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားစပြောကြတယ်၊ ကျွန်မမသိဘဲနဲ့၊ ကလေးကဘာမှသံသယမဖြစ်နိူင်ပါ။ ငါစကားပြောဆိုမှုတစ်ခုလုံးကိုမမြင်မှီ၊ နံပါတ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးသူ့ဆဲလ်ဖုန်းမှာရှာပြီး၊ မကြာသေးမီကမှသူမထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။ အမှားကသူမကိုချက်ချင်းဆန့်ကျင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမျှော်လင့်သင့်သည်။ ကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်သူမကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူကကျွန်ုပ်အားအရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းနှစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မမြင်ဖူးကြောင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအချို့။ သူ၏သားကျိန်ဆိုခြင်း၊ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏သားနှစ်ယောက်အတွက်ပင်ယုံကြည်မှုအပေါ်အခိုက်အတန့်မှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးယခုတစ်နှစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည် ယခုဤအာဇာနည်နေ့အဆုံးသတ်ရေးအတွက်အပြီးသတ်သက်သေသာဓက .. မည်သည့်အကူအညီအတွက်မဆိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သူတို့ဟာဒီစကားလုံးတွေဟာလိမ်ပြောသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။ သူတို့ကသူတို့အနားမှာလူကောင်းတစ်ယောက်ရှိနိုင်တယ်၊ သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိသူတို့မှာဘာရှိသလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ပြီးတော့အဲဒီမှာရွှေထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေ၊ မိန်းမတွေကလိမ်ပြောနေတာပဲ။ အနှေးနှင့်အမြန်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းလိမ်ညာမှုကိုခံနေကြရပြီးအမှန်တရားဟာလေသက်သက်ထက်မကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ယောက်ျားလေးများ၊ မိန်းမများသည်သူတို့၏အခွံတွင်ရှိသောစွမ်းအားကိုသိကြပြီး၊ ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိကြသည်။ မိန်းမများတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိတော့ပါ၊ အစပိုင်းတွင်ကြာရှည်စွာအိပ်မောကျနေပြီး၊ သင်ပင်ပန်းလာပြီးသင်၏ပိုက်ဆံအားလုံးကိုစွန့်ခွာရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးတွေအရမ်းအေးပြီးလက်တွေ့ကျပါစေ
အဆိုးဆုံးကတော့မင်းကိုမိန်းမတစ်ယောက်ယုံတာပဲ။ အနှေးနှင့်အမြန်ဆိုလျှင်သင်ကံကောင်းပါကသူသည်သင့်အားလိမ်ညာခဲ့သည်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အမြန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သူမကိုငရဲသို့ပို့လိုက်ခြင်းသည်နာကျင်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကမင်းကိုအမြဲတမ်းမင်းကိုထိန်းထားမှာပါ ဟုတ်ပါတယ်, နောက်ပိုင်းသူတို့ကအတူတူပြုသူကိုယောက်ျားအကြောင်းတိုင်ကြား။
ကောင်းပါပြီဆရာများ၊ ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအခြေအနေများကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြသူများထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းခံရန်အလွန်အပူတပြင်းရှိပါသည်။
ငါလွန်ခဲ့တဲ့7လကသူမ၏တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည်လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးများတွင်တွေ့ရသည့်အရာမဟုတ်ဘဲလူတစ် ဦး ၏နှလုံးကိုဖမ်းစားနိုင်သည့်ကြင်နာမှုဖြစ်သည်။
သူမသည် ULTRA ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်ကိုဆေးကြောထားသောအဆင့်တွင်ရှိပြီးသူမ၏လုပ်ရပ်များအားတရားမျှတစေသည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာအရသူမသည်သူမ၏ဘာသာတရားကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရသေးကြောင်း (သူမအပျိုစင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသော်လည်း)
ကျနော်တို့ဇွန်လမှာစပြီးချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူမအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာ (စစ်တပ်မရှိတဲ့) သူရည်းစားဟောင်းဟာစက်တင်ဘာ ၈ ရက်နဲ့ ၁၁ ရက်ကြားမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဆက်ဆံကြကုန်အံ့, အိုကေ။ ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေပါ၊ သူမတစ်ယောက်တည်းရှိနေတယ်၊ ​​မိသားစုမရှိဘူး၊ ကျွန်မတို့ကကိုလံဘီယာလူမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သူမအခြေအနေကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့အခါကျွန်မအိမ်မှာနေဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်
တစ်ခဏမှနောက်တစ်ခုသို့သူမဓာတ်ငွေ့ကိုခြေထောက် တင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ကြီးထွားလာပုံရသည်။ တစ်နေ့မှာသူဟာကျွန်တော့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောတာ (လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကငါနဲ့ပြတ်သွားတဲ့သူ) နဲ့စကားစမြည်ပြောတာကိုကျွန်တော်ဒေါသထွက်မိတယ်။ ငါဟောင်းကိုလမ်းကနေမောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်သူဘာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာလဲဆိုတာငါနားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ဆင်ခြေပေးဖို့ဆင်ခြေဆင်ခြေပေးပုံရတယ် ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော့်ကိုသူရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုစစ်ဆေးခိုင်းတယ်။ သူနဲ့သူစကားပြောခဲ့တာကိုသူတို့ကသူတို့ချစ်ခင်တွယ်တာစွာပြောဆိုခဲ့တယ်။ သူမကဂျာမန်ကားတစ်စီးရဲ့နာမည်ကောင်းတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကိုအမှတ်တံဆိပ်ပါဖန်ခွက်တစ်ခွက်ပေးလိုက်တယ်။ စကားစမြည်ပြောတော့သူမကဓာတ်ပုံကိုသူမဆီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်ဆောင်အဖြစ်ယူခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တယ်။ သူကသူမအားပြက္ခဒိန်၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြသထားသောနေ့များနှင့်အတူပေးပို့ခဲ့သည်။ စကားပြောဆိုမှု မှလွဲ၍ သူမကသူမသည်ငါ့ကိုမချစ်သော်လည်းသူကချစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည် တစ်နေ့တာတွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲသူမ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်သူမကိုမုန်းတီးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အေးခဲနေသောနေ့ရက်နှစ်ရက်ကြာပြီးဘယ်နေရာမှာမှသူမအရာအားလုံးကိုပြုပြင်တဖန်ငါနှင့်အတူချစ်ခင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ဟာဒီအကြောင်းအရာကိုမထိဘဲတစ်လနီးပါးကြာခဲ့တယ်။ မနက်တစ်နာရီအထိသူမနဲ့အတူရိုးသားဖို့၊ သူမရဲ့ရည်းစားလာမလား၊ သူမငါနဲ့တကယ်တကယ်လေးစားမှုရှိသလားဆိုတာကိုရှင်းလင်းဖို့သူမကိုပြောခဲ့တယ်။ သူကဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​လွယ်ကူတယ်၊ သက်သောင့်သက်သာရှိတယ်။ (မကြာသေးခင်ကသူကသူမကိုလက်မှတ်တွေနဲ့ပို့လိုက်တဲ့အီးမေးလ်တစောင်တွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ) ပြီးတော့သူကကျွန်မကိုစိတ်ပူစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုသူကအာမခံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်သူမကိုယုံကြည်ဖို့ထပ်ခါထပ်ခါသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူမဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးသော့ခလောက်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်။ သူမသတိမထားမိဘဲစကားဝှက်အသစ်ကိုမှန်းပြီးအကြိမ်အနည်းငယ်သွင်းပြီး ...
Whatsapp တွင်သူနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျများရှိခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုမဖတ်နိုင်သော်လည်း၊ ဖျက်သိမ်းလိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျအမြောက်အမြားရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၂။ အခြားကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီမှာမက်ဆေ့ခ်ျတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီမှာသူနဲ့ငါတို့အတူတကွပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခရီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးနယ်စပ်ကိုသွားတယ်။
(၃) သူကငါသူမပြောခဲ့တဲ့အခြားကောင်လေးကိုတူညီတဲ့ပြက်လုံးတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေသူကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်လို့သူ့ကိုပြောလိမ့်မယ်။
လအတော်ကြာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးတစ်နေ့တွင်သူသည်သူ၏ဖုန်းကိုထပ်မံသွားပြီးအန်ဒရက်နှင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆစကားပြောဆိုမှုကိုတွေ့ခဲ့သည်။ သူကသူမကိုရှာနေတုန်းပဲ၊ သူမသူမကိုမကြာခဏဆက်သွယ်နေတယ်၊ ​​သူမကသူမငါနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာမသိဘူး ဒါကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုကုတ်ခြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ငါတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘာလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ငါသူမကိုထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့သတင်းစကားကိုတွေ့တော့သူမဆဲလ်ဖုန်းကိုဖောက်ဖျက်မိလို့စိတ်မကောင်းပေမယ့်အဲဒါကိုငါတွေ့ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူမကအရူးသွားတယ်၊ ငါစိတ်ပညာစိတ်ပညာတစ်ခုပြောတယ်၊ ငါစွဲလမ်းနေတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ သူမအဲဒီညမှာပဲသူမငါ့ကိုစွန့်ခွာသွားမယ်လို့ပြောတယ် ငါသူနဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ် ချက်ချင်းပဲသူစိတ်အေးသွားပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်၊ ဒါကောင်းတယ်၊ သူတို့သိပ်မပေးကြဘူး ...
မကြာသေးခင်ကကျွန်မတို့မွေးရပ်မြေမှာနေထိုင်တဲ့ဂယ်လာနာအမည်ရှိကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီကသူမရဲ့ WhatsApp ကိုမေးမြန်းပြီးသူရေးတဲ့စာကိုသူအရမ်း ၀ မ်းသာကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါသူမရဲ့ဖုန်းကိုရိုက်ထည့်နိုင်ခဲ့သည့်ကြိမ်ငါသူမသူမရေးသားခဲ့သည်သောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်ပစ်ပေမယ့်ကောင်လေး "သင်မည်မျှလှ၏", "ကောင်းတဲ့ညဥ့်အခါရှိသည်" စသည်တို့ကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုတုံ့ပြန် သူမဆဲလ်ဖုန်းကို ၀ င်ခွင့်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းသူမကြည့်သောအခါသူမခွဲခြားသိမြင်ရန်လိုသည်ဟုသံသယရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သိသာသည့်အချိန်တွင်မဟုတ်ဘဲမဟာဗျူဟာအရပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်၊
သူမလိင်အကြောင်းပြောခြင်းကိုရှောင်သည်၊ အမည်မသိနံပါတ်သို့ဖုန်းခေါ်တာစသည်စသည်ဖြင့်အခြားသိမ်မွေ့သော (သို့) သိပ်မအသေးစိတ်သေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။
အခြေအနေနှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏သီအိုရီများကိုပြင်ပမှကြည့်ရှုသူများသိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ သူမကရိုးသားသည်ဟုကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်သည့်အခြားအရာများ (လျော့နည်းမှုမရှိ) ရှိပါသည်။
၁။ သူမကငါနဲ့အတူနေပြီး၊ ငါနေတဲ့အိမ်မှာနေဖို့၊ ငါထက်သူမရဲ့လစာပိုကောင်းတယ်၊ ငါယူပြီးယူလာတယ်။
3. ဒီအများဆုံးနာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်စုံတစ် ဦး ရှိရန်အခြားသူများနှင့်အတူစွန့်စားခန်းများနှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းကိုရှာဖွေသည်
ကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်မဲသူဖြစ်ကြောင်းကိုသိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်ခြင်းနှင့်သူမသည်မိန်းမကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လိုပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ် ပို၍ သံသယဖြစ်မိသည်။ ငါဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့်လက္ခဏာများအားလုံးနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအမြင်ပေးလိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ပြောပြသည်။ ဖတ်ရှုသူတစ် ဦး ကသူမကိုသိနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာသူမဤသို့ပြုမူခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ဟုထင်ရသည်။ လူတစ်ယောက်နှင့်
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပျံသန်းနေသောအမျိုးသမီးကိုသင်ပို့လိုက်သည်၊ သူမမျက်နှာပျက်နေသည်ကိုသင်မြင်တွေ့နေရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုတွေ့ရပြီးသူမသည်အခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ရန်သင့်အားလိမ်ပြောရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏အားနည်းချက်ကိုနားလည်ထားပြီးအောင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်တော့်ကိုအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ၂၂ နှစ်လုံးလုံးသဘောပေါက်ပြီးသူမကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတိုင်းအချိန်ကုန်လွန်သွားရင်ကျွန်တော်ဟာပြောင်းလဲသွားတော့မယ်ဆိုရင်တစ်နေ့မှာသူမဆဲလ်ဖုန်းကိုကိုင်ပြီးမင်းနဲ့စကားပြောနေပြီဆိုတာကိုသူမငါ့ကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမအရာအားလုံးကိုပြောပြီးသူမကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ငါ့ကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ ငါတိုက်ခန်းကနေထွက်သွားခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့မှာကလေး ၂ ယောက်ရှိပြီးအဲဒီတိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဝယ်လိုက်တော့ငါမထွက်ခွာတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမှားယွင်းတဲ့တိုင်ကြားချက်တစ်ခုလုပ်မိပြီးအဲဒီအချိန်ကမိန်းမကိုထောင်ချလိုက်တာဟာသူမလိမ်ပြောတာတောင်မှဥပဒေကသူမကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ ငါချိုချိုလေးနဲ့စီးခဲ့တဲ့ shit လေးကိုငါလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးကတည်းကငါလည်းစွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ ငါကွာရှင်းမှုလုပ်နေတယ်။ ကံမကောင်းတာကငါ့ရဲ့ကလေးတွေပဲ၊ ငါဟာလိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးထောက်ပံ့ပေးမယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အကုန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ သို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်ကသင့်ကိုကူညီသည်ဟုဆိုလျှင်၊ ၎င်းသည်အဆင့်ကိုမြှင့်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းထက်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်။ မရနိုင်သောကြောင့်ပထမလိမ်ညာမှုတွင်ပစ်ပယ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။
Mike portnoy ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Okuninushi၊ ဒီလင့်ခ်မှာအဖြေတွေကိုမင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ en.rudd-o.com/archivos/how-se-crea-una-personona-infiel
Mike Portnoy ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်အားပြောပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူနှစ်ယောက်မစွန့်ခွာလိုသောအခြေအနေမျိုး၌ကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ကောင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ခုထက် ပို၍ စဉ်းစားသော်လည်း၎င်းကိုစွန့်ခွာရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ယောက်တည်းနေချင်တယ်၊ တစ်ယောက်ကငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်၊ နောက်တစ်ယောက်ကငါ့သူငယ်ချင်းပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါ့ကိုချစ်ကြပေမဲ့ငါလိမ်လည်သူတစ်ယောက်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းကငါချစ်မိပြီဆိုတာငါ့သူငယ်ချင်းကိုငါပြောခဲ့တာကိုမသိဘူး သူနဲ့သူငယ်ချင်းကမသိဘူး၊ ကျနော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကရည်းစားအရိုးပဲလို့ထင်တယ်။ ငါတို့ဘယ်လောက်အထိနီးကပ်နေတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ ဒါကမှန်တယ်လို့ငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ငါ့အိမ်ကိုလုံးဝလာပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီနိုင်တယ် ငါကဒါကိုကုစားဖို့တကယ်ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ပိုဆိုးတာကမကြည့်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုဘယ်လိုအဆုံးသတ်ရမှန်းမသိဘူး
Senseyese \_ t ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါ့ကိုမယုံပါနဲ့။ ပထမဆုံးမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေမှာမင်းဟာမင်းကိုလိမ်ပြောပြီးနောက်တစ်ယောက်ကပြောနေသူတစ်ယောက်နောက်မှာရှိနေဖို့စစ်မှန်တဲ့စစ်သည်တော်ပဲ ကောင်းသောအရာအတွက်မလာပါနှင့်၊ သူ့ကိုနှစ်ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်တွင် ၃ ကြိမ်နှင့်သူမလိုက်ဖက်လျှင်သင်သူ့ကိုအခွင့်အရေးများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်မကောင်းမှုမရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်၊ သူဟာ ၂ ခုကနေနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုမသွားတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆက်ဖြစ်နေတာလဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာအာဇာနည်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်၊ အချိန်ကိုပေးတယ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အရမ်းစောလွန်းတယ်၊ ငါဟာဒီလူ၊ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏အနာကိုကုသရန် ၂၄ လကြာပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Myspace လူမှုကွန်ယက်မှသမီးငယ်နှစ်ယောက်နှင့်အတူသမီးငယ်နှစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာပုံရသည်။ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျွန်မသူမ၏ဆေးကုသမှုကိုသူမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာအခြေအနေကောင်းနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ကျွန်မတို့ခွဲနေပြီးအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်မတို့ ၄ နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူမနဲ့အတူ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇွန်လမှာနေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမဟာသူမနဲ့သူမနဲ့အတူပြည့်တန်ဆာလုပ်ဖို့သူမကိုအပ်နှံတာကိုမလေ့လာဘဲ၊ အခြားတစ်ယောက်ကအိမ်ကိုပန်းတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်။ သူတို့ကမိန်းမကမင်းကိုမင်းကိုလှည့်စားနေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပြီးပြီ။ ငါသူမကိုယုံတယ်။ ငါသက်သေအထောက်အထားရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမတွေ့ရင်သူမနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်၊ သူမဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့သူအတော်များများနဲ့အတူသူမကကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးလိုချင်တယ်လို့မပြောဘူး၊ မင်းမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းရှိတာကြောင့်သူမအလုပ်မဖြစ်သလိုသူမကငွေတောင်းခံဖို့ငွေအများကြီးပေးရတာပါ။ သူမကအခြားသူတစ်ယောက်ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်သူမပေးခင်အထိအပြောင်းအလဲမလုပ်ဖို့သူမကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးသူမအားကျွန်ုပ်အားခွင့်လွှတ်ရန်အလွန်လိုလားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ရေဖိတ်ကျဆင်းသွားသည့်ကောင်နှင့်နောက်တစ်ခါထပ်နမ်းရန်မိန်းကလေးအားကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ငါသူမကိုပစ်ချလိုက်တဲ့ရေခွက်ကိုကျွန်တော်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူမကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်တော့မယ်၊ အပြောင်းအလဲကအလုပ်သွားတော့မယ်။ ကျွန်တော် ၂ လလောက်ကြိုးစားပြီးစာသားနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီမှာပျက်စီးမှုပမာဏနဲ့ငါ့အတွက်အရာအားလုံးသေသွားတာဟာနှစ်နှစ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံဖို့ခဲယဉ်းပေမဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကြောင့် ငါလည်းကွာရှင်းပြတ်စဲနေတယ်။ ဒီနှစ်မှာဘုရားသခင်ကတားမြစ်ထားတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Claudio Cesar ဟုသူကပြောသည်
မင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိစ္စကအထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူမစိတ်ရင်းမှန်သည်ဟုထင်မြင်မိသည်၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမကိုဘူတာရုံမှသူမ၏ဖခင်ကိုခေါ်ယူရန်ငါနှင့်အတူလိုက်ပါ၊ ဆက်သွယ်မှုခံစားခဲ့ရသည် သူမနှင့်သူမ၏ဖခင်တို့နှင့်အတူသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သက်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမသည်သူမနေထိုင်သောအခန်းတွင်သူမကိုသူမနှင့်သူမအလုပ်တွင်ပိုင်ရှင်ကိုလုယက်ခဲ့ကြောင်း၊ သူမငှားရန်တစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်ကြောင်းသူမပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီကိုလက်မခံပါ၊ သို့သော်သူမအားကျွန်ုပ်အားငှားရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာလိုပါကအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ဤမျှလောက်မယုံကြည်ပါ၊ ထူးဆန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ငါမှားတယ်၊ မမှားနိုင်ဘူး၊ ငါနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာငိုရင်ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတစ်ခုခုရှိရင်ငါ့ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး၊ မသိဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဘာလုပ်ရမယ်၊ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ သူမကူညီချင်တယ်၊ သူမလည်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမလိမ်နေတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊ ငါ့ကိုကူညီပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပီရူးလီမာ
claudio cesar အားပြန်ကြားပါ
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေAprilပြီ ၃၀ ရက်၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုအခြားသူတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရာထဲရှာဖွေခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာစနေနေ့တွင်အကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့ပြီးသူ့ကိုမတွေ့ခဲ့ပါ၊ လေးလအတူတကွပြီးတဲ့နောက်ငါတို့လမ်းတွေကွဲသွားတယ်၊ သူမတစ်ယောက်ယောက်နဲ့သူမခိုင်းမချင်းသူမကိုငါ့ကိုအိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းကမင်းထိုက်တန်သောတန်ဖိုးဖြစ်မည့်သူမ၏ငွေကိုအစမှပေးသောမိန်းမတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသမီးကိုပေးလေလေသူမသမီးကိုတန်ဖိုးထားလေလေ၊ သူမရဲ့သမီးအတွက်ပိုက်ဆံသိပ်မများတာကြောင့်သူမချစ်တဲ့သူကိုပိုက်ဆံပေးရလိမ့်မယ်။ ငါသူမကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဖို့ပီဆို ၃၀၀၀ တန်ကိုပေးပြီးသူမမပေးခဲ့ဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကငါဒေါ်လာ ၂၃၀ လောက်သွားခဲ့တယ်၊ အဲဒီငွေပြန်ပေးပြီးတဲ့အထိငါဟာသူမကိုအားနည်းချက်များစွာနဲ့သိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါသူ့ကိုမိန်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ပေးလိုက်တယ်။ သူကသူတို့ကိုငါမဝယ်မချင်းမဝယ်ခဲ့ဘူး။ အချိန်ပိုပေးပြီးသူမှာသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲပိုက်ဆံပေးပေမယ့်ငါကြိုးစားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ သူမကိုချစ်ပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်သူမနှင့်အခြားအိပ်ရာတစ်ခုတွင်သူမအိပ်ရာထဲကပ်ထားသည့်အခါကျွန်ုပ်မျက်လုံးမှစကချွတ်ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။
၉ နှစ်အရွယ်စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ၅ လခြားပြီးပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်၊ ကျွန်မတို့ဟာမကြာခဏဆိုသလိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလေးတွေနဲ့အတူထွက်သွားဖို့ရှာခဲ့တယ်။
အမျိုးသမီးကြီးကကြက်ဥ ၂ ဥ၊ တစ်လုံးကြော်နှင့်တစ်ခြားကြက်ဥကိုချက်ပြုတ်သည်။ တကယ်တော့ငါအိမ်မှထွက်သွားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၌ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သူမနှင့်တွေ့ပြီးတစ်လအကြာတွင်သူမ၏ခင်ပွန်းအားသူမ၏မိဘများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ' ဒီစဉ်းစားသူကိုအိမ်သူအိမ်သား။ တကယ်တော့၊ ငါ့ရဲ့အိမ်၊ ငါ့ကလေးတွေရဲ့အိမ်ကအဲဒါကိုငါတို့ရဲ့အိမ်ထဲယူလာခဲ့တယ်။
ငါပြthatနာများနှင့်အိမ်၏အတွေးနှင့်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးခံစားခဲ့ရအလွန်ယိုယွင်းသောသူနှစ် ဦး စလုံးခံစားသောကြောင့်, ငါမထွက်ခွာမီကတည်းကသူမအဲဒီလိုဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ရိုးရှင်းစွာအခြို့သောအမျိုးသမီးများသည်အဆိုးမြင်ခြင်းနှင့်အလွန်လိမ်လည်သူများဖြစ်ကြသည်။
အနည်းဆုံးတော့မိန်းမတစ်ယောက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးဖြစ်သော်လည်းသူမပြောချင်သောအရာများ၊ လိမ်မကျသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်ကိုလိမ်ညာနေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးမကြာခဏပင် ကျွန်မတို့လိမ်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမယ့်ငါတို့မိဘတွေရဲ့ပုံစံတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခဲ့ကြပြီးတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး လိမ်ပြောတာကြောင့်သူမမှာလိမ်နေတဲ့ဖခင်နှင့်အမေရှိခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လိမ်ညာနေသောအမျိုးသမီးများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရေတွက်ခြင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်၊ ထိုသို့သောယောက်ျားများမရှိဟုမဆိုလိုပါ။ ငါပြောချင်တာကမင်းနဲ့ပြtheနာတွေမစခင်အခြားသူနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအနည်းငယ်တည်ရှိခဲ့တယ်။ သူတို့ကလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုပြင်ပမှာဆက်ဆံရေးကိုစတင်တဲ့အခါ၊ ခင်ပွန်းကိုငြင်းပယ်ဖို့အချိန်ကအရမ်းတိုတယ်။ အမှုအရာတော်တော်များများမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးပtheိပက္ခတွေဖြစ်စေတယ်။
Jose ALberto သို့ပြန်သွားပါ
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ် ဦး စလုံးသည်တွေ့ကြုံမှုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။ ၎င်းသည်သူတို့ပြောသောအရာများ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်စိကန်းခြင်းနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခံစားချက်စသည်တို့ကို ဦး စွာလေ့လာသောအသိဉာဏ်ရှိသူများအတွက်လိမ်သည့်အမူအယာသို့မဟုတ်အမူအယာများကိုတိုင်းတာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းကြိုက်ရင် အချိန်ကာလ၊ ချစ်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းစသည်တို့ကိုဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကျိုးနပ်သည်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိပြီး ၆ လခန့်ကြာလျှင်သင်ပြုလုပ်သောအပျက်အယွင်းများကိုတိုင်းတာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ခုခုအတွက် (ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံ gentlemen မှကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သည်)
Lucio CCONISLLA TRUEVAS ဟုသူကပြောသည်
၄- လေ့လာသင်ယူသောပုံစံများ - မတူကွဲပြားသူများ၊ လက်ထောက်၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်နေရာချထားခြင်း။
LUCIO CCONISLLA TRUEVAS သို့စာပြန်ပါ
တစ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်တော့်ကိုလှည့်စားတယ်ဆိုရင်ငါဟာမြေအောက်အောက်မှာသုံးမီတာကိုမွေးဖွားမယ်၊ သူမဟာငါနဲ့ကစားမကစားဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာလိမ်ညာမှုကိုသည်းမခံဘူးဆိုတာသိလို့ပါ။ သူမသည်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ အကောင်းဆုံးခင်ပွန်း၊ အကောင်းဆုံးမိသားစုဖခင်နှင့်အလွန်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်းသူသိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောခဲ့သည်မှာသူသည် bullshit မပြုလုပ်မီ၎င်းသည်ပြောရန်နှင့်၎င်းအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သူလည်းသူ့ဘဝနှင့်အတူပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် (Sancho) ။
ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာအားလုံးကိုပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တန်ဖိုးရှိပြီးပညာရေးများစွာရှိသောလူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးတွင်မည်သည့် bullshit ကိုမှခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်။ ကျရှုံး
သူတို့ဟာလူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့ဇနီးသည်တွေနဲ့ပိုပြီးထိတွေ့ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောဆက်ဆံရေးနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည့်ကလေးများနှင့်အတူခံစားချက်များကိုမခံစားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
SLUTS (သို့) SLUTS အမျိုးသမီးများသည်ပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုရှာဖွေနေသူသို့မဟုတ်နတ်ဆိုးကိုရှာဖွေနေသူများဖြစ်သည်။ ၅ မိနစ်မျှသာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ အဆိုးဆုံးမှာ၎င်းတို့အားခေါ်ဆောင်လာသည့် bastard သည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံလာပြီးသစ္စာဖောက်မှုကိုမေ့ဖို့လွယ်တယ်ထင်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဤစာဖတ်ခြင်းကိုသင်ဖတ်ရှုပါကကလေးများပါ ၀ င်သည့်အခါသင်၏ခင်ပွန်းကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတန်ဖိုးထားပါကသင်၏ခင်မင်မှုကိုအလွန်အလေးအနက်ထားရန်နှင့်ပြproblemsနာများကိုမရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏ခင်ပွန်းကိုတန်ဖိုးထားရန်နှင့်သူလည်းအလားတူတုံ့ပြန်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
KARMA တည်ရှိပြီးသင်၏ဘ ၀ ၌တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဆိုးခြင်းအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်မြင်လိမ့်မည်။
မစ္စတာ။ အမည်မသိ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Don Juancito၊ ကျွန်တော်ပြproblemနာအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က ၄၅ နှစ်အရွယ်လေးတစ် ဦး နှင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများဖြင့်အရာဝတ္ထုများကိုညစ်ညမ်းစေသည်ဟုပြောခဲ့သည်၊ လုံးဝမုသားဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးနှင့်ကောင်လေးကိုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ??? သူတို့ကိုငါသတ်ပစ်သလား။ ငါစားတယ်။
SR ကိုပြန်ပြောပါ အမည်မသိ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာမှမလိုဘဲသူမကိုမြင်သည်။ WhatsApp ၏တုန့်ပြန်ချက်များသည်တိုတောင်းသည်။ စကားလုံးတစ်လုံး၊ နှစ်လုံး၊ ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသူသည်ဘာသာရပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။